Qeexitaanno iyo Sharaxaada, Fikirka iyo Ujeeddada - The Word Foundation
Qeexitaanka Fikradaha iyo Dareenka
QAYBAHA DIIWAANGALINTA IYO SHARAXADA
Shuruudaha iyo odhaahda ka fikirka iyo aayaha
Shil, An: badiyaa waxaa loo sheegaa inay tahay dhacdo lama filaan ah ama dhacdo iyadoon sabab laheeyn. Si kastaba ha noqotee, shilku waa qeybta kaliya ee la arki karo ee silsiladda ama wareegga shay aan la ilaalin ama ka horreeya sababa lama huraan ah inay dhaliso dhacdo la yiraahdo shil. Qeybaha kale ee goobada waa fikradaha iyo ficilada la xiriira shilka.
Aia: waa magaca halkan loo siiyay unug si guul leh ugusoo gudubtay heer kasta iyo kasbasho kasto oo lagu baraarugay shaqadiisa Jaamacada sharciyada, ee jirka, kaamil ahaan, galmada aan dhiman karin; kaas oo ka soo qalinjebiyey dabeecadda, isla markaana ku taagan dhinaca waxgaradka sida dhibic ama xariiq u kala soocaya dhinaca dabeecadda.
Alcoholism: waa cudur maskaxeed oo sameeya rabitaan-iyo-dareen, cudur kaas oo jirka jirku ku dhaco cabitaanka khamriga. Khamrigu waa mid aad u fiican oo la aamini karo, iyadoo loo hayo sidii addoon, ama loo isticmaalo dhexdhexaad ahaan sameynta u diyaargarowga daawooyinka. Laakiin aalkoladu, sida ruux ahaan, waa mid naxariis daran oo aan naxariis lahayn markii uu noqdo sayid. Kaliya waa waqti, noloshan ama nolosha mustaqbalka, marka qof kastoo sameeya uu daruuri u ahaado inuu wajihi doono ugudbinta iyo ku guuleysiga ama uu ku guuleysan doono. Khamrigu waxyeello ma leh, haddii aanu qofku cabin; waa dhexdhexaad uun. Laakiin marka qofku cabbo t, ruuxa ay khamrigu dhexdhexaadka ka tahay wuxuu xiriir la sameeyaa rabitaanka dhiigga iyo isagoo la dareemo dareemayaasha wuxuuna isku xiraa rabitaanka iyo dareemidda aaminsanaanta inay tahay saaxiib, rumaysadkanna wuu korayaa wuuna korayaa. Waa ruuxa kalsoonida iyo wada-noolaanshaha wanaagsan dhammaan heerarka sakhraansan ee ay la socoto dhibbanaha. Markuu sameeyuhu aakhirkiina aad u liito oo uusan qaadan karin qaabka aadanaha, fekerku wuxuu u horseedaa xabsi uu ku leeyahay dhulka hoose ee dhulka, halkaas oo ay ku xaddidan tahay miyir beelid. Dareenka miyir-qabka ayaa ka sii jilicsan oo ka cabsi badan dababka ugu daran ee fiqi ahaaneed ama cadaab kale oo la qiyaasi karo. Khamrigu waa ruuxa ilaaliya dabeecadda; laakiin waxay dishaa waxa ay keydiso. Ruuxa sakhraansan wuxuu ka baqayaa Iftiinka Miyir-qabka ee aadanaha, wuxuuna ku dadaalayaa inuu bini'aadamka awood u yeesho. Dariiqa kaliya ee la hubo ee lagu noqon karo sayid oo uusan addoon u ahayn ruuxa khamriga waa: Ha dhadhamin. Yeelo aragti adag oo maskaxeed oo go'an oo aanad u qaadan been iyo qaab kasta. Markaas mid baa sayid noqon doona.
Cadho: waa rabitaan gubta dhiiga iyo ka xanaaqida wixii loo malaynayo ama khalad u ah naftiisa ama mid kale.
Imaanshaha: waa unugyada dabeecadda oo loo qaybiyay tiro ama qaab waana la arki karaa; Waxay ku xiran tahay isbeddel ama lumis, marka wixii isku xira ay beddelaan ama laga noqdo.
Rabitaanka: waa rabitaanka in lagu qanciyo dhadhanka iyo urta sheyga, iyada oo laga jawaabayo rabitaanka qaybaha dabiiciga ah si ay arrinta u sii socdaan.
Fanka: waa xirfad muujinta dareenka iyo rabitaanka.
Astral: waa arin xiddig leh.
Jirka Astral: sida eray loo isticmaalo buuggan ayaa ah in lagu sharraxo iftiinka-adag ee jirka afarta jireed jirka ah. Saddexda kale waa hawada-adag, dheecaanka-adag, iyo adag-adag. Cimilo-adagka iyo dareeraha adag-waa camiran oo kaliya, maahan
loo sameeyay qaab. Jirka astral-ka ahi waa kan qaabeeya arrimaha jidhka koraya iyada oo loo eegayo qaab-neefsiga illaa dhalashada. Ka dib, jirka jirku wuxuu ku xiran yahay jirka astral inuu qaabkiisa qaab u yeesho
iyadoo loo eegayo qaab qaab-neefsi ah. Kadib qaab-dhismeedka neefsashada wuxuu jirka uga tagaa geeri markuu dhinto, jirka astral wuxuu kusii dhowaadaa qaab dhismeedka jirka. Kadib jirka astral wuxuu kuxiranyahay qaab dhismeedka dayactirka, waxaana loo kala firdhiyaa sida
qaab dhismeedka ayaa xumaanaya.
Jawi: waa xajmiga arrin kala duwan oo ka soo baxa oo ku wareegsan shay ama wax shay kasta.
Cimilada, Qofka Jirka: waa cufnaanta guud ee iftiinka, hawo, dheecaanka, iyo unugyada adag ee ka yimaadda oo ku sii faafa wareega afar durdurro joogto ah oo unugyo ah gudaha iyo jirka oo neefsanaya, dhinaca firfircoon ee qaab-neefsashada.
Cimilada Dadka, Maskaxda: waa qaybta firfircoon ee waxkuleeyaha, qaybta maskaxda ee Triune Self, dhinaca ugu go'an ee qayb ka mid ah oo ka jira kilyaha iyo dareemayaasha iyo dareemayaasha iskaa wax u qabso iyo dhiigga jirka bini aadamka. Waxay kor u kacdaa, garaacis, jiidaa oo riixdaa dhiigga iyo dareemayaasha jirka iyadoo laga jawaabayo rabitaanka iyo dareenka qofka wax yeelaya ee ku dhex jira jirka.
Cimilada Dadka, Maskaxda: waa qayb ka mid ah jawiga maskaxda ee Triune Self kaas oo loo maro jawiga maskaxda iyo iyada oo dareenka-maskaxda iyo rabitaanka-maskaxdu ay ku fikiri karto meelaha dhexdhexaadka ah ee udhaxeysa isdaba joogga aan kala joogsiga laheyn iyo qulqulka neefsashada.
Cimilada, Midka Saddexaad ee Saddexaad ee Is-bahaysiga: waa, sidaa la dhihi karo, kaydka biyaha, kaas oo iftiinka miyir-qabka ah loo gaarsiiyo atmospheres maskaxda iyo maskaxda si ay u-galaan-jirka-jirka iyada oo loo marayo neefsashada.
Cimilada Dhulka: wuxuu ka kooban yahay afarta aag beddelis ama ballaadhan ee iftiimaya, hawo, dheecaanno, iyo unugyo adag oo xajinaya wareegga joogtada ah ee ka socda iyo isku-xidhka dhul-wareegga dhulka, iyo gudaha iyo gudaha illaa xiddigaha ugu fog.
Neef: waa nolosha dhiigga, qalfoofka iyo dhismaha nudaha, ilaaliyaha iyo burburiyaha, ama dhammaan hawlaha jidhku ku sii socdo ama ka baxaan jiritaanka, ilaa ay ka fikiraan in la sameeyo dib-u-dhiska una soo celiyo jirka nolosha weligeed ah.
Neef-qaabeyn: waa unug dabeecadeed oo ah qaab nololeed shaqsiyeed (naf) mid kasta oo bini aadam ah. Neeftu waxay dhistaa oo cusbooneysiisaa waxayna siisaa nolosha unugyada iyadoo loo eegayo qaabka uu qaabku qaabeysan yahay, qaabkiisuna wuxuu u sii jirayaa qaab-dhismeedka, jirkiisa, inta uu jirku joogo. Dhimashadu waa natiijada ka soo baxda jirka.
Cell, A: waa hay'ad ka kooban cutubyo ku-meel-gaar ah oo duruufaha ka soo if-baxa, hawad leh, dheecaanno, iyo durdurro adag, oo loo habeeyey qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka iyada oo laxiriirta iyo falcelin la xiriira afar qaybood oo isku-xidhka: isku xidhka neefsashada,
isku xirka-nolosha, qaabka-isku-xirka, iyo unugyada isku-xirayaasha unugyada unugyada unugyada, oo aan la arki karin, eeysan aheyn unugyada ku-meel-gaarka ah ee la-soo-saaray oo laga yaabo inay ku muuqdaan ama lagu arko mikroscope. Afarta cutub ee kombuyuutarradu way isku xidhan yihiin
wada jir ah oo ku nagaadaan qolka; unugyada ku-meel-gaarka ahi waa sida durdurro qulqulaya oo ka-qaybgalayaashu sii wadaan inay qabsadaan oo isu-uruuriyaan unugyada ku-meel-gaarka ah iyo sidii jirka unugyada inta lagu gudajiro sii-haynta hay'adda weyn ee unuggu qayb ka yahay. Afarta cutub ee unugyada ka kooban unugyada bini aadamka waa kuwo la diidi karo; marka aan lagu siin cutubyo ku meelgaar ah jirka ayaa joogsan doona, wuu duugoobi doonaa oo wuu baaba'ayaa, laakiin kuwa sameeya qolka ayaa markale dhisi doona jirka mustaqbalka.
Fursad: waa eray loo isticmaalo in marmarsiiyo looga dhigo isfaham la'aan, ama in loo sharxo ficilada, walxaha iyo dhacdooyinka dhaca oo aan si sahal ah loo sharaxin, sida "cayaaraha fursadaha," ama "dhacdooyinka dhaca." Laakiin ma jiro wax sidan fursad ah, dhinaca dareenka in dhacu u dhici karay si kale oo aan ahayn, oo ka madax bannaan sharciga iyo kala dambeynta. Ficil kasta oo fursad ah, sida kaararka shilinta, kaararka wareejinta, tuurista dhimashada, waxay u dhacdaa si waafaqsan sharciyada qaarkood iyo sida loo kala horeeyo, ha ahaadeen sida ay yihiin shuruucda fisikiska ama sharciyada kaydinta iyo khiyaanada. Haddii waxa loo yaqaanno fursadda ay ka madax bannaan yihiin sharciga, ma jiri lahayn sharciyo dabiici ah oo lagu kalsoonaan karo. Markaas waxaa jiri doona hubaal wakhtiyada xilliyeed, maalin iyo habeenba. Kuwanu waa sharciyo aan sifiican u fahamno ama aan u fahamsanahay, sida dhacdooyinka "fursad" ah, oo aannan dhibaato kugabayn in la fahmo.
Character: waa heerka daacadnimada iyo runta ee qofka dareenkiisa iyo rabitaankiisa, sida ku cad fikirkiisa shaqsiyeed, eray iyo ficil. Daacadnimo iyo run sheegis iyo ficil waa aasaaska
dabeecad wanaagsan, astaamaha lagu garto ee xoog iyo tixgalin iyo dabeecad cabsi leh. Dabeecaddu waa mid ku dhashay, lagana dhaxlay noloshiisii ​​hore, iyadoo saadaalinta fikirka iyo ficilka; waa la sii wadaa ama la beddelaa sida qofku doorto.
Wadaag: waa fikirka qofka laftiisa ee la xiriira qummanaanta, iyo helitaanka Iftiinka, sida uu qabo nidaamka fikirka.
Fikradda, rabbaaniga, "Gudin": ma aha impregnation ee ugxanta haweeneyda, ee ay ku xigi doonto uurjiifka iyo dhalashada jirka kale ee jirka. Dhalashada galmada kama dhalan karto fikirka rabbaani ah. Ujeedka run ahaantii “fidsan" waa dib u dhiska jirka aan caadiga aheyn ee galmada dhimashada si ay uhesho jirka jirka aan dhameystirnayn ee galmada nolosha weligeed ah. Markii laba iyo tobankii jeer ee ka horreeyay ku darsamay jeermarka bisha kow iyo tobnaad, markay ku soo noqdaan madaxa, waxaa halkaas ku kulmay jeermiga qoraxda, oo waxa ka hela iftiinka Iftiinka Iftiinka. Taasi waa is-fahamka, fikirka rabbaani ah. Dhismaha jidhka kaamil ah ayaa la raacayaa.
Maskax: waa isku darka aqoonta ee ku saabsan waxa aan la qabanaynin ee la xiriira maado kasta oo akhlaaqeed. Waa halbeegga qofka fikirka saxda ah, dareenka saxda ah, iyo tallaabada saxda ah; waa codka aan codka lahayn ee qummanaanta ee qalbiga ka mamnuucaya fikirka ama ficil kasta oo kaga duwan waxa ay ogtahay in ay sax tahay. "Maya" ama "Ha" waa codka aqoonyahanku waxa ku saabsan waxa ay tahay in laga fogaado ama aan la sameynin
ama ha siinin ogolaansho in lagu sameeyo xaalad kasta.
Miyir: waa, aqoon; heerka ay ku jiraan waxa miyirku miyir qabo xagga aqoonta.
Miyir-qabka: waa joogitaanka wax walba oo -wax kastoo uu yahay mid miyir-beel ah oo uu miyirkiisu yahay as maxay tahay ama of waxa ay tahay ama qabato. Kelmad ahaan erey ahaan waa "miyir" oo loo soo gaabiyey magac magac ah
Faahfaahinta "ness." Waa eray gaar ah oo luqadda ah; macnaheeda ma leh, macnaheeduna wuxuu gaarsiisanyahay fahamka dadka. Miyir-qabku waa bilow, oo aan dhammaad lahayn; waa mid aan la arki karin, iyada oo aan lahayn qaybo, tayo, gobolo, astaamo ama xadeyn. Hase yeeshe, wax kasta, laga bilaabo kan ugu yar ilaa kan ugu weyn, iyo wakhtiga ka dambeeya iyo firaaqada ayaa ku xidhan, in la ahaado iyo wax la sameeyo. Joogitaankiisu waa unug kasta oo dabeecadeed iyo wixii ka baxsan dabiiciga ayaa u oggolaanaya wax kasta iyo waxa abuurku inay miyir qabaan as maxay tahay ama of waxa ay yihiin, iyo inay sameeyaan, in ay ogaadaan oo ay miyir ku yeeshaan dhammaan waxyaaba kale iyo kuwa kale, iyo inay horumariyaan heerarka sare ee sii socota oo ay u murgoodaan dhabta dhabta ah ee dhabta dhabta ah.
Been sheegashada: waa u diyaar garowga aan sharciga lahayn ee dhibbanaha-jirka in uu rumeysan yahay in arrimuhu yihiin sida ay u muuqdaan, iyo in loo aqbalo sida run ah waxa loo sheegay ama loo qoray.
Dhaqanka: waa horumarka sare ee barashada, xirfada iyo dabeecada dadka, ama ilbaxnimada guud ahaan.
Dhimashada: waa bixitaanka nafta is-miyir qabka ah ee jirkeeda ka socota, jirkeeda ama goynteeda oo ah xargaha silsiladaha fiican ee jirka ku xiro qaab-neefsiyeedka jirka. Kala goynta waxaa keenaya rabitaanka ama oggolaanshaha qofkasta in jidhkiisu dhinto. Jabinta dunta, dib u soo kicinta ma ahan wax aan macquul aheyn.
Qeexitaanka: waa isku dhafka ereyada laxiriira oo qeexaya macnaha maado ama shay, adoo ka fekeraya midka, aqoonta la heli karo.
Soojiidashada ninka: ayaa si kala duwan oo macna leh loogu sheegay Qorniinka hore, sida ku jirta sheekada Baybalka ee Aadan iyo Xaawo beerta Ceeden; jirrabaadkoodii, dhicitaankoodii, dembigoodii asalka ahaa iyo eryitaankoodii Eden. Tan
waxaa la muujiyey sida afarta marxaladood ee bixitaanka-jirka-ka-tagitaanka boqortooyada Joogtada ah. Asalka ka yimid boqortooyadii Joogtada ah ee adduunkan dhalashada iyo geerida, wuxuu ahaa kala duwanaan, kala qaybsanaan, dib-u-habeyn iyo deggennaan. Isbeddelku wuxuu billowday markii qofka damac-iyo-dareenku dheereeyey qayb ka mid ah jirkiisa kaamil ah oo uu dareemay in qaybta la dheereeyey. Qaybtu waxay ahayd sameeyuhu arkayo rabitaankiisa xagga jidhka labka iyo dareenka uu ka leeyahay jidhka dhedigga isla markaana ka fikiraya naftiisa sidii laba halkii ay ka ahaan lahayd mid, iyo ka tegitaankeedii joogtada ah. Dib-u-habeynku waa hoos udhaca ama fidinta gudaha iyo finanka ilaa xaalada gudaha iyo kan hoose iyo isbedelka qaab dhismeedka jirka. Degenaanta ayaa ku soo aroortay daarta sare ee dhulka, horumarka xubnaha galmada iyo jiilka xubnaha galmada.
Rabitaan: waa awood miyir qabta dhexdeeda; waxay ku keentaa isbedelo laftiisa waxayna keentaa isbeddelo waxyaabo kale. Rabitaanku waa dhinaca firfircoon ee jirka gudihiisa, dhinaca is-goysyada ah ee dareemaya; laakiin rabitaanku ma shaqeyn karo iyada oo aan dhinaceeda kale la kala garan karin, dareen. Rabitaanku waa mid aan la arki karin laakiin wuxuu umuuqdaa mid kala qaybsan; waa in lagu kala soocaa: rabitaanka aqoonta iyo rabitaanka galmada. Waa iyada oo la dareemayo, sababta keentay soosaarka iyo taranka wax kasta oo aadanuhu yaqaanno ama dareemayo. Sida rabitaanka galmada waxaay u muuqataa mid aan muuqan, laakiin waxay ka muuqataa afarta laamood: damaca cuntada, rabitaanka hantida, iyo rabitaanka magaca, iyo rabitaanka awooda, iyo dalalkooda aan la tirin karin, sida gaajada, jacaylka, nacaybka. , kalgacayl, naxariis darro, dirir, hunguri, hammi, hammi, daahfurnaan, iyo guul. Rabitaanka aqoonta lama beddeli doono; waa mid joogto ah sida rabitaanka Aqoonta.
Rabitaan Magac, (Magac): waa mid ka kooban aragtiyo muujinaya astaamo aan la qiyaasi karin oo shakhsiyadda ka mid ah, kuwaas oo faaruq ah isla markaana u muuqda sidii xumbo oo kale.
Rabitaanka Awooda: waa khayaali la abuuray kaas oo ah farcankiisa iyo cadowga rabitaanka aqoontiisa –waa damaca galmada).
Rabitaanka Aqoonta: waa rabitaanka go'aaminta iyo iskucelcelinta rabbilaha inuu ku ekaado xiriir mihiim ah ama midnimo lala yeesho yaqaanna Triune Self.
Rabitaan galmo: waa ikhtiyaar la'aan ku dhisan jaahilnimo naftiisa ku saabsan; rabitaanka lagu muujiyo jinsi ahaan jirku uu ku jiro, oo doonaya inuu ku midoobo dhinaciisa culeyskiisa aan la xakameyn, iyada oo lala midoobayo jinsi ka soo horjeedda.
Rajo xumo: waa isu dhiibida cabsi; iscasilaad aan loo baahnayn si loo daayo waxa dhici kara.
Dareen: waa daruuri; taas oo ah inay noqoto ama dhacdo, natiijada wixii laga fikiray oo loo sheegay ama la qabtay.
Dabiicadda, Jirka: waxaa ka mid ah waxkasta oo ku saabsan dhaxalka iyo dastuurka ee jidhka bini-aadamka; dareenka, galmada, qaabka, iyo astaamaha; caafimaadka, booska nolosha, qoyska, iyo xiriirka aadanaha; cimriga nolosha iyo
habka dhimashada. Jirka iyo dhamaan waxyaabaha jirka khuseeya waa miisaaniyada amaahda iyo deynta oo ka soo wareegtay qof noloshiisii ​​hore taasoo ka dhalatay wixii uu ku fikiray oo ku sameeyay noloshaas, oo ay tahay inuu kula macaamilo nolosha maanta. Qofku kama baxsan karo waxa jidhku yahay oo uu matalayo. Qofku waa inuu aqbalaa taas oo uu u sii wadaa inuu u dhaqmo sidii waagii hore, ama mid ayaa laga yaabaa inuu u beddelo wixii hore wixii uu u maleynayo oo uu doonayo inuu noqdo, inuu sameeyo, iyo inuu yeesho.
Dareen, Maskaxda: waa wax kasta oo ku lug leh dareen-iyo-doonis sida nafta qofka oo miyir qabta jidhka; waa natiijada waxa uu kii hore soo rabay ama fikiray oo qabtay, iyo waxa mustaqbalku ka soo bixi doono
Waxa qofku hadda doonayo iyo waxa uu ka fikiro oo yeelo kaasoo saameyn ku yeelan kara dareenka iyo rabitaanka qofka.
Dareen, Mental: waxaa loo go'aamiyaa sida waxa, waxa, iyo waxa waxa rabitaanka iyo dareenka ee qofka-jidhka ahu qabaa u maleeyaan. Saddexda maskax - jidhka-maskaxda, maanka-doonis, iyo dareen-maskaxeed — ayaa loo diraa adeegga kan sameeya, oo ka fikiriya aragtidiisa 'Triune Self'. Fikirka uu qofka samaynaya ku samaynayo sedexdaan maskax waa himiladiisa maskaxeed. Ujeedadeeda maskaxdu waxay ku jirtaa jawigeeda maskaxeed waxaana ku jira dabeecaddiisa maskaxeed, fikirkiisa maskaxeed, helitaan aqooneed iyo hibo maskaxeed kale.
Aayaha, Noetic: waa qadarka ama heerka Aqoonta qofku is leeyahay oo kaligiis ah sida dareenka iyo rabitaanka, kaas oo la heli karo, waa qaybtaas jawiga nololeed ee kujirta jawiga maskaxda qofka. Tani waa natiijada ka soo baxda
qof fikirkiisa iyo adeegsiga awooda hal abuurnimo iyo abuur; waxay ku tusaysaa sida qofku aqoontiisa u leeyahay aadanaha iyo xidhiidhka aadanaha dhinaca kale, dhinaca kalena waxa loo maraa aayaha jidhka, sida dhibaatooyinka, dhibaatooyinka, cudurada, ama
cuduro. Aqoonta qofku is leeyahay waxaa lagu muujiyaa is-xakameynta, xakameynta qofka dareenkiisa iyo rabitaankiisa. Mustaqbalka nololeed ee midnimada ayaa la arki karaa waqtiga qalalaasaha, marka qofku ogaado waxa loo baahan yahay in loo sameeyo naftiisa iyo dadka kale. Waxay sidoo kale u imaan kartaa fikrad loogu talagalay iftiinka maaddada.
Ibliis, The: waa qofku damaca xun ee naftiisa u gaarka ah. Waxay tijaabisaa, gowracdaa oo waxay middaa u horseedaa ficil qaldan nolosha jidhka, oo waxay dhibi doontaa mid inta lagu guda jiro qayb ka mid ah dhimashadiisa kadib.
Cabirka: waa wax muhiim ah, oo aan ahayn meel bannaan; Boosku ma laha cabbir, boos ma leh qaab ahaan. Cabbiryadu waa cutubyo; cutubyadu waa qaybo aan la arki karin oo ka kooban arrimo fara badan; sidaa daraadeed arrintaasi waa wax la wada samaynayo, oo ka kooban ama unugyo aan la arki karin oo la xidhiidha oo midba midka kale uga soocay nooc kasta oo arrintooda ah, marka loo eego dhinac walba. Shaygu waa afar cabbir: ness, ama dusha sare; gudaha, ama arin xagal ah; maaddada, ama khadka khadka; iyo jiritaanka, ama arrinta tilmaanta. Nambaradu waxay ka soo muuqataa mid muuqata oo caan ah ilaa tan fog.
Heerka ugu horeeya ee cutubyada, korantada ama qaybaha dusha sare, ma laha wax qoto dheer oo la dareemi karo ama dhumuc adag ama adag tahay; waxay ku xiran tahay gaar ahaanna waxay u baahan tahay cabbirka labaad iyo kan saddexaad si uu u noqdo mid muuqda, la taaban karo, adag.
Heerka labaad ee cutubyada waa ku-jira ama xagal xagal ah; waxay kuxirantahay cabbirka seddexaad ee loogu talagalay inay ku daboolaan dhinacyada dusha sare ee korantada.
Cabbirka saddexaad ee cutubyada waa marin ama arin khad ah; waxay ku xiran tahay dariiqa afaraad ee ay ku qaadato, fuliso, gudbiso, gaadiidka, soo dejinta iyo soo dhoofinta arrin ka timaadda qodobka aan xuddun lahayn ee gudaha iyo in la hagaajiyo meelaha dusha sare leh oo sidaas darteed jirka iyo xasilinta meelaha dusha sare leh.
Cabbirka afaraad ee halbeegyadu waa joogitaan ama qodob muhiim ah, isugeyn dhibco ah qodobka aasaasiga ah ee dhibcaha, oo lagu wado ama kaas oo loo dhisayo laguna qaabeynayo cabirka xiga ee mawduuca arrinta. Markaa waa la arki doonaa in arrinta arrinta aan la sharraxaynin ay muujiso iyada oo loo marayo ama iyada loo marayo dhibic, iyo isku xigxiga qodobbada sida qaddiyada qoddobbada qodobbada, iyada oo loo adeegsanayo cabbirka xiga ee halbeegga sida arrinta la soo saaray, iyo iyadoo la adeegsanayo taas oo ah mid ku dhex-jirta ama arrin xagal ah, oo kakooban sagxadaha dusha sare ilaa la arki karo arrin adag oo la taaban karo oo la muujiyey sida ficillada, walxaha iyo dhacdooyinka adduun-weynaha jir ahaaneed.
Cudur: Natiijada cudurku wuxuu ka yimaadaa tallaabada isdhexgalka ee fekerka maaddaama ay sii socoto in ay sii marayso qeybta ama jirka si loo saameyn karo, ugu dambeynna fekerka fekerkaas oo kale waa cudurka.
Xaqdarro: waa fekerka ama ficil lid ku ah waxa lagu yaqaan inuu sax yahay, iyo ka fikirka iyo sameynta waxa lagu yaqaan inay khaldan yihiin. Midka sidaas u fikiraya iyo qabashadiisa ayaa ugu dambeyntii naftiisa ka dhigaysa inuu aaminsan yahay in waxa qumman yahay qalad yahay; iyo wixii qaldama waa sax.
Doer: Qaybtaas miyir-qabka ah iyo kuwa aan la kala saari karin ee 'Triune Self' kaas oo mar mar dib uga sii dhex jira jirka ninka ama jirka haweeneyda, oo caadiyan isku aqoonsata inuu yahay jirka iyo magaca jirka. Waxay ka kooban tahay laba iyo toban qaybood, lix ka mid ahi waa dhinaceeda firfircoonaanta rabitaanka iyo lix waa dhinaca ay dadku dareemaan. Lixda qaybood ee firfircoon ee rabitaanka ayaa mar labaad si isdaba joog ah ugu dhex jira xubnaha jirka iyo lixda qaybood ee dareenka ah ee dareenka ah in ay si is daba joog ah ugu noolaadaan xubnaha haweenka. Laakiin rabitaan
iyo dareenku waligood kala go ’; rabitaanka jirka ee jirka wuxuu sababey jirka inuu noqdo nin wuxuuna xukumaa dareenkiisa; iyo dareenka jirka haweeneyda waxay sababtay in jirkeeda uu noqdo mid dhedig ah oo xukuma rabitaankiisa.
Shaki: waa xaalad mugdi maskaxeed iyadoo ay sababtu tahay fikirka oo aan ku filnayn in la ogaado waxa la sameeyo iyo waxa aan la sameyn karin xaalad.
Riyooyin: yihiin himilooyin iyo ujeedo. Ujeeddada ujeedadu waa gobolka soo kacaya ama xaaladda soo jeedidda; si kastaba ha noqotee waa riyada soo toosa. Riyada ku jihaysan waa riyada hurdada. Farqiga ayaa ah in hurdada laga kaco
Ku riyooda dhamaan walxaha ama dhawaqa la arkay ama la maqlay oo u muuqda kuwo run ah waa halabuuritaanka qof naftiisa ama fikradaha kale ee ku saleysan asalka dunida ujeeddada; iyo, in waxyaalaha aan ku aragno ama maqalno riyada hurdada ay tahay dib-u-eegno ku saabsan asalka dunida mawduuca saadaalinta ee higsiga adduunka. In kasta oo aan hurdada ku riyoonayo dib-u-eegistu waa kuwa innaga run ah sidoo kale saadaasha adduunyada soo kacaya
hadda. Laakiin, dabcan, markii aan soo jeedno ma xasuusan karno sida dhabta ah ee riyada hurdada ay markaas u ahayd, maxaa yeelay laga soo bilaabo dunida soo kacaya, dunidu riyadu waxay u muuqataa mid hadhsan oo aan macquul ahayn. Si kastaba ha noqotee, wax kasta oo aan aragno ama maqalno ama aan ku riyoonno inta aan hurudno waa astaamaha sii murugsan ama ka yar ee ka turjumaya waxa nagu dhaca iyo waxyaabaha aan ka fikirno inta aan ku jirno gobolka soo kaca. Riyada hurdada waxaa loo ekaysiin karaa muraayad ka tarjumaysa waxyaabihii hore loo haystay. Adoo ka fiirsanaya dhacdooyinka riyada hurdada ayaa laga yaabaa inuu waxbadan ka tarjunto naftiisa, fikradihiisa iyo ujeedooyinkiisa, taasoo uusan horay u aqoonsan. Nolosha riyadu waa duni kale, oo aad u ballaaran oo kaladuwan. Riyooyinku maahan, laakiin waa inay ahaadaan, kala-saaraan, ugu yaraan noocyo iyo noocyo. Gobollada dhimashada ka dib waxay laxiriiraan nolosha dunida waxoogaa sidoo kale waa riyada hurdada ee gobolka toosan.
Duty: waa wixii qofku iska leeyahay ama mid kaleba, oo ay tahay in la bixiyo, si ikhtiyaar ah ama ikhtiyaar ah, waxqabadkaas oo waajibkaas waajib ku ah. Waajibaadka waxay ku xirayaan qofka-jirka-ah nolosha nololeed ee soo noqnoqonaya, ilaa uu isagu sameeyo
gudashada waajibaadka oo dhan, si ikhtiyaar ah oo farxad leh, iyadoo aan rajo laga qabin ammaanta ama cabsida eedda, iyo in aan laga helin natiijooyinka si wanaagsan loo qabtay.
"Laba-gobe": waa eray loo isticmaalo in lagu muujiyo damac xun oo ka yimid nolosha hore ee fal-gala ee jirka aadanaha ee hadda jira, kaasoo ku nool jawiga nafsadda isla markaana isku dayaya inuu jirka ka dhex baxo oo saameyn ku yeesho falalka rabshadaha, ama inuu ku dhex-baxo falalka waxyeelada leh samee iyo jir. Camalku wuxuu mas'uul ka yahay damacyadiisa, sida degto ama sidii xuub xumaan oo kale ah; damacyadeeduna lama baabi'in karo; waa in ugu dambeyntii lagu beddelaa fikirka iyo rabitaanka.
Geerida: waa geedi socod deg deg ah ama waqti dheer soo if baxay oo ah qaab neefsashada oo qaab qaabkiisa wanaagsan laga soo bilaabo ilaa geeska ilaa wadnaha kadibna afka isku mariya afkiisa neefsashada ugu dambeysa, badanaaba keenaya cuncun ama buuq cunaha ah. Markuu dhinto qofku jidhku wuxuu ka tagayaa neefta.
Fudud: waa natiijada ku tiirsanaanta himilaha ee aayaha iyo laftiisa; umad gaar ah oo kudhaqan, iyadoon loo eegaynin taajirnimo ama faqri, nolol nolosha ama ehelka ama asxaabta.
Ego: waa dareenka aqoonsiga "I" ee bina aadamka, taas oo ay ugu wacan tahay dareenka laxiriira dareenka aqoonsiga I-ness ee Saddex-geesoodka ah. Is-fahanka ayaa had iyo jeer ku jira shakhsiyadda jirka laftiisa, laakiin isku-kalsoonaanta ayaa ah oo keliya dareen aqoonsiga. Hadday tahay
Dareenka ayaa ah aqoonsiga, dareenka jirka ku jira wuxuu isu ogaan lahaa inuu yahay "mid" joogto ah oo aan dhimaneyn "kaasoo" ku sii jira oo ka sii gudba waqtiga oo dhan sii wadida isbadal la'aanta, halka bina aadamka uusan wax badan ka ogaanin nafsadiisa
Element, A: waa mid ka mid ah afarta nooc ee aasaasiga ah ee dabeecadda loo kala saaro oo ay dhammaan unugyada ama ifafaalaha ay ka kooban yihiin, si qeyb kasta loo kala sooco nooc kasta oo ka mid ah saddexda qaybood ee kale, iyo si nooc kasta ah waxaa lagu garan karaa dabeecadiisa iyo shaqadeeda, ha ahaato isku darka iyo u shaqeynta sidii xoog dabeecadeed ama isku jir ah.
Elemental, An: waa unug dabeecadda u muuqda oo ka mid ah sheyga dabka, ama hawada, ama biyaha, ama dhulka, shaqsiyan; ama sidii unug shaqsi ah oo ka mid ah unugyo badan oo unugyo dabiici ah iyo xakamaynta tirada cutubyada.
Elementals, Lower: waxay ka kooban yihiin afarta shey ee dabka, hawada, biyaha, iyo unugyada dhulka, halkaan waxaa lagu magacaabaa causal, portal, form, iyo unugyada qaab dhismeedka. Iyaga ayaa ah sababaha, isbedelada, daryeelayaasha, iyo muuqaalada waxkastoo dabiiciga ah taas oo
u soo noolaato, isbeddel, oo in muddo ah sii jiraya, kaas oo burburi doona oo baabi'i doona, oo markale dib loogu abuuri doono muuqaalo kale.
Elementals, Upper: waa unugyada dabka, hawada, biyaha, iyo walxaha dhulka, kuwaas oo ay ka abuurmayaan sirdoonka qaybaha, ama Saddex geesood ahaanta oo dhammeystiran, kuwaas oo ah Dowladda adduunka. Naftooda
dadkani waxba kama oga oo waxba ma qabtaan. Iyagu ma ahan waxyaabaha aasaasiga u ah dabeecadda shaqsiyadeed sida unugyada dabeecadda, inta lagu gudajiro horumarka. Waxaa laga abuuray dhinaca aan muuqanaynin ee walxaha iyadoo la fikirayo, oo si sax ah looga jawaabo fekerka Saddex-geeslaha ah ee ku hagaya waxa ay tahay inay sameeyaan. Iyagu waa fulinta sharciga, oo aan ilaahyada dabiiciga ama awoodaha kale ka adkaan karin. Diimaha ama dhaqannada waxaa lagu sheegi karaa inay yihiin malaa'igo, malaa'igo, ama wargeeyayaal. Waxay u dhaqmaan si toos ah Dowladda Dunida, iyada oo aan la adeegsanaynin bini’aadamka, in kastoo hal ama in kabadan ay u muuqan karaan inay bini aadamka siinayaan, ama inay isbeddel ku keenaan arrimaha ragga.
Dareen: waa kicinta iyo muujinta rabitaanka ereyada ama ficillada, iyadoo laga jawaabayo dareenka xanuunka ama raaxada iyadoo la dareemayo.
Masayr waa dareenka xun-xanaaqa ama qadhaadhka qadhaadhka qofka ama waxa leh waxa hunguri doonaysa inuu noqdo ama haysto.
Sinnaanta aadanaha: waa in qof kasta oo mas'uul ahi xaq u leeyahay inuu ka fikiro, inuu noqdo, wuxuu doono, sameyn karo, lahaado, wuxuu haysto, wuxuu awood u yeelan karo, sameyn karo, sameyn karo iyo lahaado, xoog la'aan, cadaadis ama xakameyn, illaa xad inuusan isku dayin
in laga hor istaago mid kale xuquuq isku mid ah.
Sare, waa wax aan loo aanayn waqtiga, bilowga iyo dhammaad la'aanta, gudaha iyo ka dib waqti iyo dareenka, maaha mid ku tiirsan, xadidan ama la qiyaasi karo wakhti iyo dareenka horeyba, hadda, ama mustaqbalka; in waxyaalahaas lagu yaqaano inay yihiin sida ay yihiin, oo aan u muuqan karin inay yihiin sida aanay ahayn.
Khibrad: waa soo-jiidashada ficil, shay ama dhacdo dhacdo laga soo saaray iyada oo la adeegsanayo dareenka ku aaddan dareenka jirka, iyo fal-celinta oo ah jawaab-celinta dareenka sida xanuun ama raaxo, farxad ama murugo, ama dareen kasta ama shucuur kale. Waayo-aragnimadu waa nuxurka xasuuqii loogu talagalay sameeyaha waana in la baraa, in wax-qabadku ka soo saari karo barashada khibradda.
Baabi'inta, An: waa ficilka, shayga ama dhacdo taas oo ahayd muuqaalka muuqaalka jirka ee fikirka ka hor inta aan loo marin ficil ahaan, shay ama dhacdo dhacdo diyaaradeed, sida masiir ahaan.
Xaqiiqooyinka: waa xaqiiqooyinka ujeedada ama falalka shakhsi ahaaneed, shay ama dhacdooyinka gobolka ama diyaaradda ay la kulmeen ama la arkay, sida caddaynaya iyo isku dayay dareennada, ama sida loo tixgeliyo loona go'aamiyo sabab. Xaqiiqadu waxay ka kooban yihiin afar nooc: xaqiiqooyinka jireed, xaqiiqooyinka maskaxda, xaqiiqooyinka maskaxda, iyo xaqiiqooyinka qarsoodiga ah.
Iimaanka: waa mala-awaalka kii sameeya kaas oo dareen xoog leh ka muujiya qaab-neefsiga sababta oo ah aaminaadda iyo kalsoonida shaki la’aan. Rumaysadku wuxuu ka yimaadaa kan wax sameeya.
Beenta: waa bayaan sida xaqiiqda ah ee waxa la rumeysan yahay inay tahay mid aan run ahayn, ama diidmada waxa la rumeysan yahay inay run tahay.
Caan, (magac) waa kooxdii isbeddelaysa ee soo-jiidashada ee astaamaha aan la qiyaasi karin ee shakhsiyadda, oo u muuqda sidii xumbo.
Cabsi: waa dareenka baqdin gelinta ama khatarta soo socota ee laxiriirta maskaxda ama shucuurta ama dhibaatada jirka.
Dareen: waa mid qofku naftiisa miyir qabo oo jidhka ku jira oo dareemaysa; taas oo dareensiisa jirka, laakiin aanuu aqoonsan oo u kala soocin nafteeda sida dareenka, jirka iyo dareemooyinka uu dareemayo; waa dhinaceyga gude-jirka-jirka ah, qeybta firfircoon ee ay rabitaan tahay.
Dareemid, Go'doomin: waa xorriyadda ay u leedahay xakamaynta maskaxda-maskaxda iyo garashada lafteeda sidii farxad miyir leh.
Cuntada: waa dabeecadda dabiiciga ah ee ka kooban isku-dhaf tir tiro oo ka mid ah xeryahooda dabka, hawada, biyaha, iyo dhulka dhulka, dhisidda afarta nidaam iyo hagaajinta jirka.
foomka: waa fikirka, nooca, qaabka ama naqshadaynta hagaha iyo qaababka iyo xuduudaha nolosha u ah koritaanka; iyo foomka hannaanka iyo qaab dhismeedka qaab muuqaal ahaan muuqaal ahaan.
Xoriyadda: waa xaalad ama xaalad rabitaan-iyo-dareen-qabuhu markuu ka go'ay dabeecadda oo uusan weli cidla 'ahayn. Xorriyadda macnaheedu maahan in qofku odhan karo ama sameeyo wixii uu doono, meel kastoo uu joogo. Xorriyaddu waa: inay ahaato iyo sameyso oo sameyso oo aan ku xirneyn wax shay ama shay afarta dareen ah; iyo, in la sii wado, ahaanshaha, sameynta, iyo lahaanshaha, iyada oo aan lagu soo lifaaqin, adoo ka fakaraya, waxa qof yahay ama waxa uu doonayo ama yeelayo ama haysto. Taas macnaheedu waa inaadan ku xirnayn fikirka shay kasta ama shay dabiici ah, iyo inaadan naftaada isku dhejin doonin intaad ka fikireyso. Ku lifaaqan macnaheedu waa addoonsiga.
function: waa tallaabo ficil loogu talagalay qof ama wax, iyo taas oo lagu sameeyo xulasho, ama daruuri.
Khamaarista: waa mid ku mashquulsan mid ka mid ah ruuxa qamaarka, ama rabitaanka xiisaha badan ee dabadheer ee lagu helo, inuu ku guuleysto lacag ama shay qiimo leh “nasiib,” adigoo “sharad,” ciyaaraha “fursad,” halkii laga kasban lahaa shaqo daacad ah.
Genius, A: waa mid muujinaya asalkiisa iyo karti u kala soocaya kuwa kale ee ku aadan howlihiisa. Hadiyadihiina waa kuwo la dhaxlo. Kuma helin barashada daraasadda nolosha hadda jirta. Waxaa lagu soo qaatay fikir iyo dadaal badan inbadan noloshiisii ​​hore waxaana la keenay isaga natiijadiisi hore. Astaamaha lagu garto ee aqoonyahannimadu waa asalnimada quseysa fikradaha, habka, iyo sida tooska ah ee loo muujiyo aqoontiisa. Kuma xirna waxbaridda dugsi kasta; Wuxuu sameeyaa habab cusub wuxuuna adeegsadaa mid kasta oo ka mid ah saddexda maskaxdiisa si uu u muujiyo dareenkiisa-iyo rabitaankiisa marka loo eego dareenka. Wuxuu la xiriiraa iskudhafkii xusuusta ee taariikhdiisii ​​hore ee jibriilkiisa.
Germ, Dayaxa: waxaa lagu soo saaray nidaamka waxsoosaarka waxayna lagama maarmaan u tahay dhalashada jirka bini'aadamka, inuu hoy u noqdo dhaq-dhaqaaqa jira. Waxaa loo yaqaannaa bisha (dayaxa) maxaa yeelay socodkiisa jirka wuxuu la mid yahay marxaladaha buuqa iyo dayaxa, waxayna xiriir la leedahay dayaxa. Waxay ka bilaabataa jirka qalliinka waxayna kusii socotaa dariiqa hoose ee wadooyinka xididdada hunguriga iyo marinnada dheefshiidka, markaa, haddii aan luminin, waxay kor ugu sii socdaan laf dhabarta madaxa. Jidkiisii ​​hoose wuxuu ku soo ururiyey laambad loo soo diray dabiicadda, oo lagu soo celiyo xagga dabiicadda xagga cuntada lagu dhejiyo cuntada, oo wuxuu ka soo ururiyaa Iftiinka dhiigga ku adkaaday is-xakameynta.
Germ, The Solar: waa qayb ka mid ah qofka wax samaynaya ee marka qaan-gaadhnimada jirku ku jiro jidhka oo uu leeyahay iftiin cad. Lix bilood waxay ku soo dhacayaan, sida qorraxda, oo dhanka koonfureed ku taal, dhanka midig ee xarigga laf-dhabarka; ka dibna waxay u rogmaysaa, dhabarka lumbar vertebra, oo waxay kor ugu socotaa dhinaca bidix dariiqa woqooyi muddo lix bilood ah ilaa ay ka gaareyso xubnaha taranka. Safarkiisa koonfurta iyo waqooyiga wuxuu kormeerayaa xudunta laf-dhabarka, wadada nolosha weligeed ah. Jeermiga dayaxa ayaa la xoojiyaa markasta oo uu ka gudbo jeermiga qoraxda.
Mahad: waa xaalad qofku ku raaxeysto shay ama shay higsiyeed, taas oo dareenka dareenka uu ku saleeyo dareenkiisa-iyo rabitaankiisa, oo xijinaya isaga, oo sidaas ka horjoogsanaya inuu arko iftiinka, iyo fahamka wax sidii ay dhab ahaantii tahay.
Gulle: waa xaalad maskaxeed, maxaa yeelay isku-buuqa ka yimaada dareennada iyo waxyaabaha aan lagu qanacsanayn. Waxaa ka mid ah inuu abuuri karo jawi calool xumo kaasoo soo jiidan doona fikradaha cudurrada iyo raaxo darrada, taas oo u horseedi karta falalka waxyeelo nafsadda iyo
kuwa kale. Daaweynta jahwareerka waa fikirka iskiis u go'aamiya iyo tallaabada saxda ah.
Ilaah, A: waa fikir la abuuray, oo lagu abuuray figradaha aadanaha inuu wakiil u yahay weynaanta waxa ay dareemaan ama ka baqaan; sida wixii qof kastaa jeclaan lahaa ama jeclaan lahaa inuu noqdo, doonista iyo sameeyo.
Xukuumadda Is-ahaanta, nafsad ahaanta, waa wadarta dareenka iyo rabitaanka waxqabadka miyir-qabka ah ee ku dhex jira jirka bini-aadamka isla markaana ah hawl wadeenka jirka. Dawladnimadu waa amar, maamul iyo qaab lagu maamulo gole ama gobol. Is-xukunka waxaa loola jeedaa in qofka dareenkiisa iyo rabitaankiisa oo ah ama laga yaabo inay u janjeeraan, iyada oo loo marayo dookhyada, nacaybka ama damacyada khalkhalka jirka, lagu xakameyn doono laguna hagi doono laguna xukumi doono qofka dareenkiisa wanaagsan ee ka soo baxa fikradaha iyo ficilka saxda ah iyo sababta, sida heerarka maamulka ee gudaha, halkii laga xakamayn lahaa waxyaabaha la neceb yahay iyo waxyaabaha neceb ee ku saabsan walxaha dareenka, kuwaas oo ah maamulka ka baxsan jirka.
Fanka: waa naxariis kalgacal u ah dadka kale, iyo fududaanta fikirka iyo dareenka lagu muujiyey xiriir laxiriira qaab iyo ficil.
Weynaanta: waa heerka qofka xorriyadda u leh mas'uuliyad iyo aqoon la xiriirta xiriirkiisa iyo la shaqeynta kuwa kale.
Hunguri waa rabitaan aan la dafiri karin in la helo, la haysto, lana haysto wixii la doono.
Dhulka, Caamka: waxaa halkan looga isticmaalaa in loola jeedo meel ama jir ka jira ama ay labo ama in kabadan ku kulmaan danaha wadaaga. Dhulku waa goob lagu kulmo kuwa sameeya xubnaha jirka bini’aadamka si ay uga wada shaqeeyaan danahooda guud. Jirka bini aadamka ayaa ah aasaaska guud ee waxqabadka u dhexeeya sameeyaha iyo cutubyada walxaha dabiiciga ah ee dhex mara. Sidoo kale dhulka dushiisa ayaa ah dhulka wadaagga ah ee fikirka dadka dunida ku nool oo dhan lagu baabi'iyo sida dhirta iyo xayawaanka ku kora oo dul deggan dhulka, kuwaas oo ah u-goynta noocyada rabitaanka iyo dareenka aadanaha.
Habit: waa muujinta eray ahaan ama ficil aragti ku saabsan qaabka-neefsiga adoo ka fikiraya. Ku soo celcelinta dhawaqyada qalaad ama ficillada ayaa badanaa keena kalsooni darro shaqsiyeed iyo goobjooge, taas oo u eg inay si sii kordheysa u sii shaac baxeyso haddii aan sababta laga saarin mooyee. Tan waxaa lagu samayn karaa iyada oo aan la sii wadin fekerka sababa caado, ama si fikir wanaagsan loo yeesho: “Jooji” oo “ha ku celin” - meel alla ha ahaadee ereyga ama ficilku. Fikirka wanaagsan iyo dabeecadda maskaxeed ee ka soo horjeedda caadeysiga waxay baabi'ineysaa aragtida qaab-dhismeedka neefsashada, sidaa darteed waxay ka hortagtaa soo noqnoqoshada.
Hoolka xukunka: waa xaalad geerida ka dib oo shaqaaluhu iska helo. Waxa u muuqda inay jiraan holal iftiin waa runtii meeleeyaha Iftiinka Ifka. Cilgiluhu wuu yaabay oo wuu argagaxay wuuna cararaa, meel kasta, haddii ay kari karto; laakiin
ma awoodo. Waxay ka warhaysaa qaabka ay dhulka ugu aaminsan tahay inuu isagu qudhiisu yahay, in kastoo uusan qaabkaas ku jirin; Foomku waa qaabkiisa neefsashada iyada oo aan la helin jidhka jirku. Qaabdhismeedka ama qaabkan Neefta Iftiinka, Xaqiiqda, ayaa sameeya Rabbiga
oo ka fiirso wixii ay ku fikirtay oo dhan, iyo waxyaabihii ay ku samaysay intii ay jidhkeeda ku jirtay oo dhan. Camalku wuu ogyahay sida ay yihiin, sida Iftiinka Naarta, Xaqa, inuu u muujiyo inay camal falaan, oo camalkuna isagaa u xukun iyaga, iyo waxay camal fali.
Xukunku wuxuu ka dhigaa mid waajib ku ah iyaga sida waajibaadka nolosha mustaqbalka ee dhulka.
Baaskiil: waa natiijada waxa qofku u maleeyo kuna sameeyo si ku habboon xaq-iyo sabab, iyo xaalada rabitaan iyo dareen marka ay ku jiraan isbahaysiga isku dheeli tiran oo ay leeyihiin
Ku bogsashada gacmaha Si looga faa iideysto bukaanka, bogsiilaha waa inuu fahmaa inuu yahay qalab diyaar u ah in dabeecadda loo isticmaalo ujeedada dib loogu soo dejiyo socodka nolosha oo nidaamsan
ama faragelin ku sameeyay jirka bukaanka. Tani waxay tahay in dhakhtarku wax ku sameeyo isagoo ku dhejinaya calaacasha gacantiisa midig iyo bidix wejiga hore iyo gadaasha madaxa, ka dibna u gudbiya saddexda maskax ee kale ee suufka, caloosha, iyo
miskaha Marka sidaa loo sameeyo jirka jirkiisa ayaa ah aaladda ay ciidamada korontada iyo magnetic ku qulqulaan oo ay gelinayaan hagaajinta mashiinka bukaanka howlihiisa kala hagaagsan ee dabiiciyan. Dhakhtarkaagu waa inuu ku sii jiraa
niyad wanaagsan, oo aan ka fikirin lacag bixinta ama kasbashada.
Bogsiinta, Maskaxda: waa iskuday lagu daweynayo jirrooyinka jirka qaab maskaxeed. Waxaa jira iskuulo badan oo iskudaya inay wax baraan oo ku celceliyaan daaweynta cudurka iyadoo dadaal maskaxeed ah, sida diidmada ah inuu jiro cudur, ama adkeynta caafimaadka.
meeshii cudurka, ama salaadda, ama ku soo celcelinta ereyada ama odhaahaha, ama waxkasta oo dadaal maskaxeed ah. Fikirka iyo shucuurta waxay saameyn ku yeeshaan jirka, rajo, farxad, farxad, murugo, dhib, cabsi. Daaweynta cudur dhab ah ayaa noqon kara
ay saameeyeen isku dheelitirka fikirka ee cudurka uu yahay dibedda. Iyadoo laga saarayo sababta, cudurka ayaa baaba'aya. Diidmada cudurku waa aaminaad. Haddii uusan cudur jirin ma jiri lahayn diidmo. Meesha ay caafimaad ka jirto, ma jirto wax lagu kasbaday adoo xaqiijinaya waxa jira.
Maqalka: waa unugga hawada, wuxuu u shaqeynayaa sidii wakiilka hawada ee dabeecadda jirka bini aadamka. Maqalku waa kanalka hawada ee dabeecadda iyo nidaamka neefsashada ee jirka ku wada xiriiraan. Maqalku waa unug dabeecadda ah oo gudbiya oo laxiriira oo qiimeeya xubnaha jirka ee habka neefsashada, wuxuuna u shaqeeyaa sida maqalka iyada oo loo marayo xiriirka saxda ah ee xubnaha.
Jannada: waa gobolka iyo muddada farxadda, oo aan ku xaddidnayn wakhtiga dunidu ee dareenka, oo umuuqda inaan bilow lahayn. Waxay ka kooban tahay dhammaan fikradaha iyo himilooyinka nolosha dhulka, halkaasoo aan laga fikirin silica iyo
Xasilooni darradu way geli kartaa, maxaa yeelay kuwan oo ah xusuusta ayaa laga saaray qaab-neefsi inta lagu gudajiray xilligii purgatorial. Samadu run ahaantii waxay bilaabataa marka uusku diyaar yahay oo uu qaabkiisa qaab-dhismeedka u qaato. Tani uma muuqato bilow; Waxay u eg tahay sidii ay had iyo jeer ahaan jirtay. Samadu waa dhammaataa markay shaqadu tagto oo ay ka dhammaato fikradaha wanaagsan iyo camal wanaagsan ee ay qabatay iyo markay samaysatay markay dhulka joogtay. Markaas dareenka aragga iyo maqalka iyo dhadhanka iyo urta ayaa ka furfuraya qaab-neefsi, waxayna galaan astaamaha ay muuqaalka jirka ka muuqdaan; qaybta qaybtu waxay ku noqotaa lafteeda, joogitaan, halka ay ku jirto ilaa ay ka soo baxeyso soo celinta xigta ee dhulka.
Jahannamo: waa xaalad shaqsiyeed ama xaalad silica, silica, ee ma aha arrin beel beel. Dhibaatada ama silica ayaa ah qeybo ka mid ah dareemada iyo damacyada oo laga soocay ugudambeeyay shaqaaluhu marinka metempsychosis. Dhibaatadu waa sababta oo ah dareenka iyo damacgu malaha dariiq ay ku kaafiyaan, ama ku helaan waxa ay u murugoonayaan, u damcaan ama u jeclaadaan. Taasina waa ciqaabtooda - cadaabta. Intii lagu jiray jir ahaaneed oo dunida ku dhex yaal, dareenka wanaagga iyo xumaanta iyo damacyadu waxay lahaayeen muddooyinkoodii farxadda iyo murugada ee ku dhexjirtey nolosha dunida oo dhan. Laakiin inta lagu jiro metempsychosis, nidaamka purgatorial wuxuu ka soocayaa xumaanta iyo wanaagga; wanaaggu wuxuu ku sii socdaa kuna raaxeysanayaa farxad la’aantooda "jannada", oo sharku wuxuu ku sii jiraa waxa markaa ah silica silica, halkaas oo dareenka iyo rabitaanka shaqsiyadeed uu noqon karo oo la soo jiidan karo, si marka markale la isu keeno, ay awoodaan, Hadday doortaan, shar ka fogow oo wanaagga ka faa'iide. Jannada iyo cadaabku waa waayo-aragnimo, laakiin aan loogu talagalay barashada. Dhulku waa meesha wax laga barto waayo-aragnimada, waayo dhulku waa meesha fikirka iyo wax lagu barto. Gobollada geerida ka dib fikradaha iyo wax qabadku waa sidii riyo oo kale oo ay haddana ku noolaayeen, laakiin ma jiraan sababla'aan ama fikir cusub.
Dhaxalka: waxaa guud ahaan loo fahmay in loola jeedo in sifooyinka jireed iyo maskaxeed, isirrada iyo astaamaha awoowayaasha qofka loo gudbiyo oo laga dhaxlo qofkaas aadanaha ah. Dabcan, tani waa inay run ahaataa illaa xad maxaa yeelay xiriir dhiig iyo mid qoys. Laakiin xaqiiqda ugu muhiimsan lama siiyo boos. Taasi waa, in dareenka-iyo rabitaanka sameeyaha aan dhimaneyn uu ku noolaado jirka bini'aadamka dhalashadiisa ka dib oo uu la yimaado maskaxdiisa iyo dabeecaddiisa. Nasabka, taranka, bay'ada iyo ururadu waa muhiim, laakiin marka loo eego tayadeeda iyo xooggeeda qofka sameeyaa wuu ka soocaa kuwan. Qaabka neefta ee sameeyaha ayaa sababa uureysi; foomku wuxuu siiyaa unugyada halabuurka neeftuna waxay ku samaysataa qaab u gaar ah walxaha ay hooyadu bixiso, dhalashada ka dibna qaabka neefsigu wuxuu sii wadaa inuu dhiso oo uu ilaaliyo qaabkiisa
dhammaan heerarka koritaanka iyo da'da. Qofka wax qabad ku sameeya jidh kasta oo bini-aadamka ah ayaa waqtigiisu dhaaftay. Neefsashadeeda qaab-nololeedkeeda ayaa wata taariikhdeeda, taas oo ka hortagaysa dhammaan taariikhda la yaqaanay.
Daacadnimo: waa rabitaanka ka fikirka iyo aragtida waxyaabaha sida Iftiinka Ifka ee fikirka uu u muujinayo waxyaalahan sida dhabta ah ee ay yihiin ka dibna loola macaamilo waxyaabahaas sida Iftiimiyaha Niyad jabka ahi u muujinayo in wax laga qabanayo.
Rajada: waa iftiinka suuragalka ah ee laga dhex arki karo dhammaan socodkiisa ku dhex yaal lamadegaanka dunida; waxay ku hogaamisaa ama u horseedaa wanaag ama xanuun marka loo eego sida ay tahay dabeecada camalka; had iyo jeer waa wax aan la hubin oo ku saabsan walxaha dareenka, laakiin waa hubaal marka sababtu sidaa tahay.
Aadanaha, A: waa ka kooban unugyo ka kooban afarta qaybood ee dabeecadda oo ay ka kooban yihiin unugyo iyo unugyo ka kooban afar nidaam oo ay matalaan afarta dareen ee aragga, maqalka, dhadhanka, iyo urta, oo si toos ah isugu dubbarideysa una shaqeeya qaab-neefsi, maamulaha guud. jirka nin ama naag naag ah; iyo, kaas oo qayb ka mid ah fal-galayaashu galaan oo dib u sii jiraan, oo xayawaankana ka dhiga.
Caadooyinka Aadanaha, Afarta Fasal ee: Adigoo ka fakaraya dadku waxay isu qeybiyeen afar fasal. Fasalka gaarka ah ee uu midkastaaba kujiro, wuxuu naftiisa geliyey fikirkiisa; wuu ku sii jiri doonaa ilaa intuu u maleeyo siduu u arko; wuu ka bixi doonaa oo wuu gelin doonaa mid kasta oo ka mid ah afarta fasal markii uu sameeyo fakar kaas oo galin doona fasalka uu ka tirsanaan doono. Afarta xiisadood waxay kala yihiin: shaqaalaha, ganacsatada, maleegayaasha, iyo
garaacis. Shaqaalahu wuxuu moodayaa inuu qanco damacyada jirkiisa, rabitaankiisa iyo raaxada jirkiisa, iyo madadaalada ama raaxada dareenka jirkiisa. Ganacsaduhu wuxuu u maleynayaa inuu qancinayo rabitaankiisa inuu kasbado, iibsado ama iibiyo ama wax uga beddelo macaash, si uu u helo alaab, uu taajir uga dhigo. Fikiriyuhu wuxuu u maleynayaa inuu qancinayo hamigiisa inuu ka fikiro, ka dhabeeyo, inuu ogaado, xirfadaha ama farshaxanka ama cilmiga sayniska, iyo inuu ku fiicnaado barashada iyo waxqabadka. Aqoonyahanku wuxuu u malaynayaa inuu qancin karo damaca inuu ogaado sababaha waxyaalaha: inuu ogaado cidda iyo waxa, meesha iyo goorta iyo sida iyo sababta, iyo inuu dadka kale u soo gudbiyo waxa isaga qudhiisa uu yaqaan.
Bini'aadamnimada: waa asalka ay wadaagaan iyo xidhiidhka ka dhexeeya dhammaan kuwa aan isku xidhnayn iyo kuwa aan dhiman karin ee jidhka bini'aadamka, waana dareenka kalgacalka leh ee aadanaha ee xiriirkaas.
Hypnosis, Is-: waa ula kac ula kac ah gelinta xaalada hurdo qoto dheer asaga oo isku shaandheyn ku sameynaya naftaada. Ujeeddada is-xakamaynta waa inay noqotaa mid is-xakameysa. Awood-is-weydaarsi is-weydaarsigu wuxuu u dhaqmaa sidii hypnotist iyo sidoo kale maaddada. Wuxuu tixgeliyaa wuxuu jeclaan lahaa inuu sameeyo taas oo uusan awoodin inuu sameeyo. Kadib, isaga oo u dhaqmaya sidii hypnotist, wuxuu si cad u faray inuu naftiisa soo saaro amarradan naftiisa marka uu hurdo hypnotic-ka. Ka dib, talo soo jeedin, isagu naftiisa ayuu seexdaa isaga oo u sheegaya naftiisa in uu hurdo, iyo ugu dambayntii in uu hurdo. Hurdada hypnotic-ka ayuu amraa nafsadiisa inuu sameeyo waxyaabaha ku habboon waqtiga iyo meesha. Markuu sidaas isu amro, wuxuu ku noqdaa xaaladdii kacsanayd. Toos, wuxuu u sameeyaa sidii loogu yeedhay. Ficilkan gudniinka waa inaanu qofku sinaba u khiyaanayn naftiisa, haddii kale wuu jahwareersan doonaa oo ku guuleysan doonaa is-xakamaynta.
Hypnotism ama Hypnosis: waa xaalad aan dabiici ahayn oo hurdo ah oo laga soo saaray maado uu isagu isu arko inuu isku buuqsan yahay. Mawduucdu waa amaba ka dhigaya inuu noqdo mid diidmo u leh hypnotist-ka, kaasoo ah inuu togan yahay. Mawduuca ayaa dhiibanaya isaga
Dareenka-iyo rabitaanka dareenka-iyo rabitaanka hypnotist-ka iyadoo sidaas samaynayana isu dhiibaya xakameynta qaabkiisa neefsashada iyo adeegsiga afartiisa dareen. Hypnotist hypnotitiw mowduuca wuxuu adeegsadaa mid ama dhammaan awoodiisa koronto-magnetic iyada oo loo marayo indhaha ama codka iyo gacmaha mawduuca oo isaga oo ku celcelinaya u sheegaya inuu seexanayo iyo in uu hurdo. U gudbinta soo jeedinta hurdada maaddada ayaa la seexanayaa. Markuu isu soo gudbiyey, isaga
Qaabka neefsashada iyo afartiisa dareen ee uu ku xakameynayo hypnotist-ka, mawduuca ayaa shardi u ah inuu adeeco amarada oo sameeyo wax kasta oo uu ku amro ninka hypnotist-ka isagoo aan ogeyn wuxuu dhab ahaan sameynayo — marka laga reebo in aan lagu sameyn karin inuu galo dambi ama sameeyo. ficil xaaraan ah haddii uusan ka ahayn inuu ku sugan yahay gobolka soo jeedintiisa sidaas oo kale ama ficil. Hypnotist-gu wuxuu qaataa mas'uuliyad culus marka uu qof kasta oo cudurka dhiig ka buuxiya. Mawduuca waa in uu kudhaco mudo dheer oo u ogolaanaya in uu mid kale xukumo. Mid kastaa ha ku dhaqmo is-xakameynta ilaa uu isagu is xakameeyo. Markaas isagu ma xukumi doono mid kale mana u oggolaan doono mid kale inuu xukumo.
Hypnotist, A: waa midka leh himilo, mala-awaal iyo isku kalsooni oo ku guuleysta isku duwidda maaddooyinkiisa oo soosaaraya ifafaalaha hypnotism illaa heerka uu ku adeegsanayo fahamka.
"I" Aqoonsiga, Beenta: waa dareenka jiritaanka aqoonsiga dhabta ah ee I-ness ee qofka yaqaan. I-ness waa shakhsiyadda is-miyirka leh ee garanaya, kuwa aan beddeli karin oo aan bilaabin ama ku dhammaaneynin weligeed ah.
Ka fikirida maskaxda-jirka iyo inaad dareento jiritaanka aqoonsigiisa dhabta ah, wuxuu uqeexee qofka sameeya aaminaada inuu isku mid yahay jirka iyo dareenka.
Ku habboon: waa rimidda waxa ku habboon in qofku ka fikiro, noqdo, sameeyo, ama haysto.
Aqoonsiga, Qofka: waa dareenka aqoonsiga qofka jirkiisa, dareenkiisa qof ahaaneed oo lamid ah sidii uu hore mid ahaan jiray, iyo dareen isku mid ah inuu noqdo mustaqbalka. Dareenka qofku inuu yahay aqoonsigu waa lama huraan oo waa hubaal inuu yahay qofka samaynaya jidhka, sababta oo ah isku-duubnideeda oo ka timaadda aqoonsiga qofka yaqaan 'Triune Self'.
I-ness: waa isku darka, walaaqsiga, iyo isbadalka joogtada ah ee aqoonsiga Saddex geesoodka ee waarta; iskuma habooneyn, laakiin joogitaankiisa ayaa u oggolaaneysa dareenka jirka bini aadamka inuu fikiro oo dareemo oo ku hadlo naftiisa sida "I" iyo inuu ka warqabo aqoonsiga aan isbedeleynin inta lagu jiro nolosha joogtada ah ee jirka jirkiisa.
Jaahwareer: waa mugdi maskaxeed, waa gobolka uu ku dhex-jiro-jirka, iyada oo aan aqoon u lahayn nafteeda iyo xaqsanaanteeda iyo sababteeda. Dareenka iyo damaca dareenkiisa iyo rabitaankiisa ayaa kuxiray qofki fekerka iyo yaqaan.
Iyadoo aan Nuurka miyir-qabku ka jirin xagga gudcurka. Iskuma kala saari karto dareenka iyo jirka ay kujirto.
Illusion: Khaladka qalqal galnimada ama muuqaalka dhabta ah, sida mecno u ahaanshaha goob ama muuqaal ay muujineyso, ama jagada nin ee fog; Wax kasta oo khiyaaneeya caqliga oo khalad ku dhaca xukunka.
Sawirka: waa gobolka fikirka dareenka iyo rabitaanku uu siinayo shey muhiim ah.
Khayaali, Nature-: waa ciyaar lama filaan ah oo aan la xakameynin oo ah dareenka xilligan la joogo ee lagu xusuusto; isku-darka ama isku-darka sawirrada laga sameeyay qaab-dhismeedka neefsashada iyada oo loo marayo dareennada iyada oo lagu xasuusto aragtiyo la mid ah, iyo isku-darka kaas oo matalaya xaqiiqda diyaaradda jir ahaaneed. Muuqaaladahan xoogga leh ayaa qasbaya, lagana yaabaa inay caqligal u noqdaan sababaha.
Xareed: waa muuqaal lab ah oo aan muuqan oo doonaya inuu ku jahwareero ama xiriir galmo la yeesho naag inta lagu jiro hurdada. Cudurka loo yaqaan 'Incubi' wuxuu ka kooban yahay laba nooc, nooc walbana nooc buu u kala duwan yahay. Waxa ugu caansan waa galmada galmada, tan kale waa galmada isku dayda inay kiciso haweeneyda, sida waxa loo yaqaan riyooyinka riyooyinka, taas oo riyada argagaxa leh ay badanaa sababi karto calool xumo ama jahwareer jir ahaaneed. Nooca nambarku wuxuu ku xirnaan doonaa caadooyinka fikirka iyo qaabka falgalka hurdada inta ay nolosheeda tooreyso. Qaabka loo yaqaan 'incubus', haddii la arki karo, wuu ka duwanaan lahaa kii malaa'ig ama ilaah, shaydaan ama caaro ama caaro.
Guurka Xayawaanka: waa awooda wadista ee aadanaha taas oo ku jirta xayawaankaas. Iftiinka aadanaha, ee ku xiran rabitaanka, ayaa ah kan ku hago ama ku hoggaamiyo xayawaankiisa ficiladeeda, marka loo eego afarta dareeme ee dabeecadda.
Sirdoonka: waa taas oo ay ku xiriiraan dhammaan Waxgaradka oo ay kala saaraan oo kala saaraan oo dejisaan xiriir kasta oo u dhexeeya mid kasta oo ka miyir qaba inuu miyir qabo; iyo, taas oo, sida iyo heerarkooda kala duwan ee miyir-qabka, muujinta, kala-sooca iyo la xiriiraan dhammaan halbeegyada ama tiro-koobyada cutubyada ee xiriirka ka dhexeeya midba midka kale.
Sirdoonka, An: wuxuu ka mid yahay nidaamka ugu sarreeya ee jumlada ah, oo la xidhiidha Is-bahaysiga Saddexaad ee Ninka oo leh Sirdoonka Sare iyada oo loo marayo iftiimintiisa, oo ay ku dheehan tahay nin, sidaas darteedna wuxuu u suurtagelinayaa inuu ka fikiro.
Sirdoonka, Faculties ee: Waxaa jira toddobo: iftiinka iyo anigu waxaan ahay awoodaha xukuma awooda dabeed; waqtiga iyo awoodaha xukuma hawada sare; muuqaalka iyo awooda mugdiga ah ee biyaha; iyo kuliyadaha diirada la saaray ee dhulka. Kuliya walba waxay leedahay howlo gaar ah iyo awood iyo ujeedo gaar ahaaneed waxayna xiriir la leedahay kuwa kale. Laydhka iftiinka wuxuu iftiin u dirayaa dunidoo dhan iyadoo loo adeegsanayo Aaladda Saddex geesoodka ah; waqtiga
kuliyadda waa tan sababa qawaaniinta iyo isbedelada unugyada dabeecadda marka loo eego xiriirkooda. Kulliyadaha sawirka waxay soo jiidaan fikradda foomka ee maaddada. Xaruntu waxay diirada saartaa kulliyadaha kale ee ku saabsan maaddada ay ku jirto
toosiyay. Kuliyadda mugdiga ahi wey taagantahay ama waxay siisaa awood awoodaha kale. Kuliyadda ujeeddadu waxay siinaysaa ujeedo iyo jihayn xagga fikirka. Kuliyada I-am waa shaqsiga dhabta ah ee Sirdoonka. Kulliyadda xallinta waa tan keliya ee xiriir la leh jirka iyada oo loo maro sameeyaha jirka.
Sirdoonka, Sare: waa xadka iyo heerka ugu dambaysa ee cutubka caqliga lihi uu u gudbi karo miyir beel ahaan. Sirdoonka ugu sarreeya wuxuu matalaa oo fahmaa dhammaan sirdoonka kale ee qaybaha. Maaha inuu xukumo Sirdoonka kale, maxaa yeelay Sirdoonku waxay ogyihiin sharciga oo dhan; iyagu waa sharci mid walboo caqligu iskiis u xukumo kuna fikiraa kuna dhaqmo si waafaqsan sharciga caalamiga ah. Laakiin Sirdoonka ugu sarreeya ayaa mas'uul ka ah kormeerkiisa
dhammaan jiritaanka iyo adduunyada oo dhan, wuuna yaqaanna ilaahyada iyo waxa ku jira dabiicadda guud.
Dambi waa waxbarista, waxbarista gudaha ah; waa aqoon toos ah oo sabab u ah kii sameeya. Kuma xirna ganacsiga ama arrimaha dareenka, laakiin su'aalaha akhlaaqda ama maaddooyinka falsafadda, waana dhif iyo naadir. Haddii uu furiyuhu u furi karo xiriirinta aqoontiisa, markaa wuxuu lahaan karaa aqoon maaddo kasta ah.
Jireysiga: waa dareenka-iyo damaca qofka sameeya, oo ka warqaba xaqiiqada dhabta ah ee nafteeda, lafteeda; Maaha sidii jiritaan, mana aha jiritaan, laakiin waa qatar ay ka dhasheen ujeedo ulakac ah nafteeda oo ka timid khayaanada dabeecadda.
Masayrka: waa cabsida iyo jahwareerka laga qabo helitaanka ama helitaanka qofka xuquuqdiisa danaha ama danaha qof kale ama dadka kale.
Farxadda: waa muujinta dareenka iyo rabitaanka qof kalsooni ku qabo.
Caddaaladda:waa tallaabada aqoonta ee la xidhiidha mawduuca la tixgelinayo, iyo xukunka oo lagu dhawaaqo oo loo qoro sharci ahaan.
Karma: waa natiijada ficilada iyo falcelinta maskaxda iyo rabitaanka.
Aqoonta, The: waa mid Saddex geesood ah kaasoo leh oo leh aqoon dhab ah oo dhab ah, mid waqti iyo mid weligeed ah.
Aqoontu waa laba nooc: dhab ah ama Is-aqoon iyo dareen-ama aqoonta aadanaha. Aqoonta qofku u leeyahay ee 'Triune Self' waa mid aan loo dulqaadan karin oo aan lagamamaarmi karin oo waa wax caam u ah garaacayaasha dhammaan dhinacyada Saddex-jirka. Kuma tiirsanaanta dareenka inkasta oo ay kujirto dhammaan waxa ka dhacay adduunka; Tani waxay la xiriirtaa wax walba laga soo bilaabo unugyada ugu yar ee horumaray ee dabiiciga ah ee Dunida oo dhan Ogaanshaha. Waa aqoonta dhabta ah ee aan beddeli karin isla markaaba laga helo tafaasiisha ugu yar iyo sida mid dhammaystiran oo la xidhiidha oo dhammaystiran.
Aqoonta-sayniska, sayniska, ama aqoonta aadanaha, waa isku-darka iyo nidaamsan ee isku-darka xaqiiqooyinka dabiiciga ah ee loo arkay inay yihiin shuruucda dabiiciga ah, ama waaya-aragnimada ay leeyihiin kuwa adeegsanaya dareenkooda aan dhisneyn iyo jirkooda aan dhameystirnayn. Aqoonta iyo hadalada sharciyada waa in la badalaa waqti ka waqti.
Aqoonta Qofka Wax Sameeya: waa udub dhexaadka wax barashada ee fakarka. Iftiinka laga xoreeyay waxyaabaha ku lifaaqan oo dib loogu soo celiyo jawiga nolasha, iyadoo la dheelitirayo fikirradeeda, waa mid aan la adeegsan karin oo aan la adeegsan karin, sidaa darteedna aqoonta; maahan "cilmiga" aadanaha.
Aqoonta Qofka Fikirka ah ee Saddex-jirka ah: waxaa ka mid ah aqoonta oo dhan ee ku saabsan maamulka sharciga iyo caddaaladda kan sameeya, iyo xiriirka uu la leeyahay kuwa kale ee ku dhex shaqeeya jirka aadanaha, fikirkooda.
Dhammaan kuwa wax fakaraya way yaqaanaan sharciga. Had iyo jeer waa ay is waafaqaan midba midka kale iyo kan garaadkooda ka shaqeeya maaraynta aayaha xubnayaasha ay ka kooban yihiin xubnaha jirka. Aqoontooda sharciga iyo cadaaladda waxay joojineysaa shaki waxayna ka hortageysaa suurtagalnimada midab-kala-sooca. Qofka wax qabad ku sameeya jidh kasta oo bini-aadam ah ayaa leh himilooyinkiisa sidii uu isagu yeelay. Taasi waa, sharciga iyo cadaaladda.
Aqoonta Qofka yaqaan Saddex-geesoodka ah, Is-Aqoonta: waxay ka kooban tahay oo ay ku dhagan tahay wax kasta oo afarta addin. Is-shaqsiyanku waa aqoon, sida I-ness-na ay u aqoonsato waana aqoonsiga aqoonta. Waxay u adeegtay
heshiiska shaqo ku tababarashada dabeecadda qaybta unugyada dabeecadda. Halkaas ayay miyir beeshay as shaqadeeda si isdaba joog ah qayb kasta oo mashiinka dabeecadda waqtiga. Markay noqotay Saddex-geesoodka Iftiinka Is-Ogaanshaha ee Caqligiisa Dunida, mid kasta
Shaqada sida ay si isdaba joog ah ugu warqabaan waqtiga waa hal mar la heli karo, iyada oo aan xadidneyn waqtiga, Waaraka. I-ness-ka aqoonta yaqaanku wuxuu caddeeyaa hawl kasta waana astaan ​​uu cutubku miyir qabo, iyo isku-kalsoonaanta yaqaanku wuu garanayaa waana aqoonta mid kasta oo ka mid ah shaqooyinkaas si gaar ah, sida wakhtiga, iyo dhammaantiisba si wada jir ah guud ahaan. Aqoontaas waxaa lagu gaadhsiiyaa fikirka maskaxda maah-ness nimada iyo is-muujinta, waxaana laga yaabaa inay uhelaan qofka sameeya inuu yahay damiir xagga qummanaanta iyo garashada caqli ahaan.
Aqoonta, Noetic (Dunida Aqoonta): wuxuu ka kooban yahay halbawlaha noodka ee dhammaan durdurradii Saddexlaha Saddex. Halkaas oo ay ku yaalliin dhammaan aqoonta Saddex-geesoodka ah oo dhan waana la heli karaa iyadoo loo adeegsanaayo aqoonyahan kasta oo kale.
Sharciga: waa dawo loo qoro waxqabadka, oo lagu sameeyo fikradaha iyo wax qabadkiisa sameeye ama sameeyeyaal, oo kuwa ku qoran ay ku xiran yihiin.
Sharciga Dabeecadda, A: waa ficil ama shaqo unug oo miyir qaba shaqadiisa kaliya.
Sharciga fikirka, The: waa in wax kasta oo diyaaradda jirku ku takri falaan ay yihiin fikir ay tahay in ay isku dheellitirto cidda abuurtay, iyada oo loo eegayo mas'uuliyadiisa iyo iskuxirka waqtiga, xaalada.
Sharciga fikirka, masiirka. Wakiillada: Qofkasta wuxuu wakiil u yahay wanaagga ama xumaanta ujeedkiisa nololeed iyo waxa uu ku fikiro iyo wuxuu sameeyo. Waxa uu ka fikiro ama sameeyo, mid ayaa ku habboon naftiisa ama nafteeda inay u adeegsadaan kuwa kale. Dadka looma adeegsan karo ama lagu khasbi karo inay ficil ka qaadaan ujeeddooyinkooda gudaha, marka laga reebo inay iyagu isku haleen afkaartooda iyo ficilladooda. Kadibna waxaa saameyn ku leh inay u dhaqmaan ama soo baxaan bina aadanka kale, khaasatan markii aysan lahayn
ujeeddo qeexan nolosha. Kuwa ujeeddadu sidoo kale waa aalado, maxaa yeelay, wax kasta oo ujeedo ah, waxay ku habboonaan doonaan wanaagga ama xumaanta Dowladda Dunida oo ay ka joogaan wakiillada sharciga ah.
Barashada: waa nuxurka waayo-aragnimada laga soo qaatay khibradda iyadoo laga fekerayo, si iftiinka loo xoreeyo oo khibraddaas aan dib loogu celin. Barashadu waa laba nooc: barashada-dareenka sida khibradda, tijaabinta, indho indhaynta, iyo duubista kuwan sida xusuusta ku saabsan dabeecadda; iyo, barashada-natiijada oo ka dhalata fakarka naftiisa sida dareen-doonis iyo xiriirkooda. Faahfaahinta barashada xusuusta ayaa laga yaabaa inay ku dhamaato nolosha jirka laakiin way lumaysaa dhimashada kadib. Waxa camalku ku barto naftiisa inuu ka duwan yahay jirka ma lumi doono; in taas ka dib waxay la jiri doontaa kan sameeya noloshiisa dhulka ku jira oo ah aqoontiisa dhaxalka ah.
Beenaale, A: waa mid runta u sheegaya waxa uu ogyahay in aysan ahayn, been ahayn.
Xoriyadda: waa xasaanad laga qaado xabsi ama addoonsiga, iyo xaqa qofku u leeyahay inuu sameeyo waxa uu raalli ka yahay, illaa iyo inta qofku aanu faragalin ku yeelanaynin xuquuqdiisa iyo doorashadiisa.
Nolosha: waa unug koritaanka, sidaha iftiinka qaab ahaan. Noloshu waxay u shaqeysaa sidii wakiilka inta udhaxaysa kore iyo kan hoose, oo ganaax ku keenaya isugeynta iyo dib u dhiska iyo isku beddelka guud isugeynta. Abuur kasta waxaa ku jira halbeega nolosha. In ninka waa qaab-neefsi.
LifeMid ka mid ah fahamka halista ah): waa wax ka badan ama ka yar riyooyin, arin muuqda oo dhab ah, laakiin aan la hubin oo lama filaan ah ama muddo dheer la soo saaray, dhacdooyin aad u muuqda iyo kuwo aad u daran - a phantasmagoria.
Iftiin: waa waxa ka dhigaya waxyaabaha muuqda, laakiin aan laftiisa laftiisa la arki karin. Waxay ka kooban tahay qaybaha iftiinka iftiinka ama iftiinka iftiinka ama iftiinka dayaxa ama iftiinka dhulka, ama isku dhafka ama isku dheelitirka iyo muujinta kuwan sida korantada ama marka la gubo gaasaska, dareeraha ama adkaha.
Iftiin, La-xiran oo aan la dhaafi Karin: waa Iftiinka Iftiinka ee Sirdoonka oo loo amaahday Triune Self, kaasoo ah shaqa-geliyaha jirka ku isticmaalo fikirkiisa. Iftiinka la aqri karo waa kan wax u sameeya u diro dabeecadda fikradihiisa iyo howlahiisa, oo dib u soo celiyo oo adeegsado mar labaad iyo mar labaad. Nalka aan la arki karin waa kan wax qabadku dib u soo nooleeyey oo uu ka dhigay mid aan la arki karin, maxaa yeelay wuxuu isku dheelitiray fikirradii iftiinka ku jiray. Iftiinka aan la arki karin ayaa loo celiyaa jawiga nololeed ee qofka waxaana loo heli karaa midkaas aqoon ahaan.
Iftiin, Miyir: waa Iftiinka ay Saddex-geesooddu ka hesho Sirdoonkeeda. Ma aha dabeecadda mana muuqato dabeecadda, in kasta oo, markii loo diro dabeecadda oo lala shaqeeyo unugyada dabeecadda, dabeecadda ayaa u muuqata inay muuqato
sirdoonka, oo waxaa loo yaqaan karaa Ilaah dabiicadda. Marka, adoo ka fakaraya, Iftiinka Ifka ayaa la leexiyaa oo lagu qabtaa wax kasta, waxay muujineysaa in waxaasi yahay sida uu yahay. Iftiinka Ifka ayaa haddaba ah Run, maxaa yeelay Runtu waxay muujisaa waxyaabo ay ahaan doonaan
sida ay yihiin, iyada oo aan la door bidin ama aan loo kala soocin, iyagoon qalin ama khayaanayn. Wax walba isagaa lagu gartaa xaggiisa, oo goortuu u leexdo, waana la taagi doonaa. Laakiin iftiinka miyir-beelka ayaa mugdi galay oo qariyey fikradaha markii dareen-iyo-rabitaan isku dayo
in laga fikiro, sidaa darteed aadamuhu wuxuu arkaa waxyaabo sida uu doonayo u arko, ama heer wax laga beddelay ee Runta.
Iftiin ku jira Doortaha, Awoodda: Marka qofku u guto waajibaadka si aan kala-fiirsasho lahayn, aan kala-sooc lahayn oo uu ku farxo maxaa yeelay waa shaqadiisa, mana aha sababtoo ah wuxuu faa'iido u yeelan doono ama ka takhalusi doono, wuxuu isku dheelitiraa fikirkiisa ka dhigay waajibaadkaas. uu waajibaadka, iyo Iftiinka uu xoreeyo marka fikradaha la isku dheellitiro waxay isaga siinayaan dareen cusub oo ku saabsan farxadda xorriyadda. Waxay isaga siisaa faham ku saabsan waxyaabaha iyo maaddooyinka uusan horay u fahmin. Maaddaama uu sii wadayo xorayntiisa iftiinka uu ku haystay waxyaabihii uu jeclaa oo uu doonayay, wuxuu bilaabaa inuu dareemo oo uu fahmo ifafaalaha ifafaale ee ku jira isaga kaas oo noqon doona Nuqulada Dhabta ah ee Sirdoonka.
Iftiinka Xayawaanka: waa falcelinta sida dhalaalka, dhalaalka, dhalaalka ama dhalaalka isku dhafka unugyada dabeecadda, iftiinka miyir-qabka ah ee ay u direen dabeecadda dadka sameeya jirka bini'aadamka.
Qeybta isku xirka, Neefta - waxay qabataa oo haysaa unugyo ku-meel-gaadh ah oo shay iftiin leh, waana isku xidhka ay neefsashadu ku xidhan tahay unugga isku xidhka nolosha ee unuggeeda.
Qeybaha isku xirka, Nolosha: waxay qabataa oo haysaa unugyo ku-meel-gaadh ah oo hawo-qaad ah, waana isku xidhka ay noloshu ku xidhan tahay foomka isku xidhka iyo unugyada isku xidha neefta ee
Qeybta isku xirka, Foomka: waxay qabataa oo haysaa unugyo ku-meelgaar ah oo walxaha dareeraha ah, waxayna ku xiran tahay unugyada isku xira iyo unugyada isku xira nolosha.
Qeybaha isku xirka, Qeyb - waxay qabataa oo haysaa unugyo ku meel gaadh ah oo maaddo adag ah, oo ay ku xidhan tahay unugyo kale oo ka tirsan xubinta ama qayb ka mid ah jidhka ay ka tirsan tahay.
"Nafta lumay," A: Waxa loogu yeero "naf lumay" maahan "nafta" laakiin waa qayb ka mid ah qaybta wax qabadka, mana aha mid joogto ah, laakiin waa mid ku meel gaar ah, lumisay ama laga jaray dib-u-jiritaankeeda iyo qaybaha kale ee sameeyaha. Tani waxay dhacdaa markii, mid ka mid ah labada xaaladood, qaybta wax qabadku ay muddo dheer ku adkaysato danaysi xad-dhaaf ah oo ay u adeegsato Iftiinka amaahda ee loogu talagalay khiyaanada ula kac ah, dilka, burburka, ama naxariis darrada dadka kale oo ay cadaw u noqotay aadanaha. Kadib Iftiinka waa ladilayaa oo qaybta wax qabadku way joogsanaysaa inay soo noolaato; waxay ka fariisataa qolalka dhulka qolof iskeed isu disha ilaa ay ka daasho, oo laga yaabo inay intaas ka dib dhulka ka soo muuqato. Arrinta labaad ayaa ah marka qayb wax qabadku nuurka ku lumiyay iyada oo loo maro is raaxaysiga raaxada, cunnada, cabitaanka iyo maandooriyaha, aakhirkiina noqda doqon aan dawo lahayn. Markaa qaybtaas sameeya waxay aadeysaa qolka dhulka. Halkaas ayay ku sii jirtaa illaa loo oggolaado inay sii wadato jiritaankeeda. Labada xaaladoodba, hawlgabku waa badbaadada dadka kale, iyo sidoo kale mid isaga u gaar ah.
Jacayl: waa Sameness Sameness iyada oo loo marayo Caalamka; qofka ku sameeya bini-aadamka, waa dareenka-iyo-rabitaanka iyo sida qof kale ee ku jira iyo naftiisa iyo rabitaanka-iyo-dareenka naftiisa gudaha iyo tan kale.
Jacaylka Door: waa xaaladda midnimo isku-dheellitiran iyo is-dhexgalka ka dhexeeya dareenka-iyo-rabitaanka, oo mid kastaaba dareemo oo uu doonayo naftiisa inuu noqdo oo isagu laftiisu ku jiro iyo sida kan kale.
Beenta iyo Daacadnimada: Doonista inaad daacad noqoto iyo inaad been sheegto waa labo shar oo gaar ah; way isla socdaan. Qofka doorta inuu noqdo qof aan daacad ahayn oo been sheegaa waa kan khibrado dheer kadib nolosha soo maray ku fashilmay inuu wax u arko sida ay yihiin
oo uu si qaldan u turjumay wixii uu u kuurgalay. Wuxuu si gaar ah u arkay dhinacyada ugu xun dadka wuxuuna naftiisa ku qanciyay in ragga oo dhami ay yihiin beenaalayaal isla markaana aan daacad laga ahayn, iyo in kuwa badanaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwo daacad ah oo run sheegaa ay yihiin kuwo xariif ah oo ku filan inay qariyaan daacadnimadooda iyo inay qariyaan beentooda. Gunaanadkani wuxuu dhaliyaa nacayb iyo aargoosi iyo dano gaar ah; oo uu qofku cadow u noqdo aadanaha, sida dambiile toos ah ama sida xikmad badan
iyo kaftanka taxaddarka leh ee ka dhanka ah dadka kale si uu isagu dani ugu gaaro Si kastaba ha noqotee inkaar weyn oo adduunka ah in midkood uu noqdo, fikirradiisa sida aayihiisa ayaa ugu dambeyntii u muujin doonta adduunka iyo naftiisa. Wuxuu waqti ku baran doonaa daacadnimada iyo runta ku jirta fekerka iyo ficilkaba inay muujiyaan wadada Is-aqoon.
Xaaraan:waa waswaaska uu ku jiro ruux niyad xumo iyo ujeedo shar leh oo dhaawac ah, oo sababa dhibaato; waxay cadow ku tahay niyad sami iyo ficil sax ah.
Hab dhaqan: Akhlaaqda suuban waa mid lagu yaqaan dabeecadda qofka wax qabanaya; way horumarsan yihiin, oo lama tallaalin. Boolida guud ma qarin doonto tayada soo jireenka ah ee dhaqanka wanaagsan ama xun, wax kastoo noqon kara booska qofka sameeya nolosha.
Muuqaal: waa walax loo muujiyey inay yihiin unugyo aan caqli-gal ahayn sida dabeecadda, iyo, taasoo u noqonaysa unugyo caqli badan sida Triune Selves.
Macnaha: waa ujeedada fekerka la muujiyay.
Dhex dhexaad, A: waa eray guud oo macnihiisu yahay kanaal, macnaheedu yahay, ama gudbin. Waxaa halkan loo isticmaalaa in lagu sharaxo qof jidhkiisa iftiimaya ama cirku fuulayo oo shucaacaya jawi soo jiita mid kasta oo ka mid ah dabeecadaha badan ee dabiiciga ah, kuwa aasaasiga ah, ama kuwa warwareega ah ee xaaladaha dhimashada ka dib oo raadiya kuwa nool. Dhex-dhexaadku wuxuu markaa u dhaqmaa sidii qaab isgaarsiineed oo u dhexeeya kan iyo kan wax ku sameeya jirka aadanaha.
xasuusta: waa soo-saaris aragti ah taas oo aragtida laga qaato. Waxaa jira laba nooc oo xusuusta ah: dareenka-xusuusta, iyo sameynta-xusuusta. Xusuusta-dareenka waxaa jira afar fasal: xusuusta aragga, xusuusta maqalka, xusuusta dhadhanka, iyo xusuusta urta. Qayb kasta oo ka mid ah afarta dareen ayaa loo habeeyey si looga dhaadhiciyo curiyaha uu isagu wakiilka u yahay, loona gudbiyo dareennada wixii laga duubo dareenkaas, laguna soo saaro; bini'aadamka, waa qaabka neefta. Taranka aragtida waa xusuus.
Xusuusta, Doer-: waa soo saarista gobollada dareenkeeda iyo rabitaankeeda jirkeeda, ama mid ka mid ah meydadkii hore ee ay ku noolayd dunidan. Qofka wax qabanayaa ma arko waxna ma maqlo mana dhadhamo ama urin. Laakiin aragtida, dhawaaqyada, dhadhanka, iyo urta ku cajabisa qaabka neefta ayaa ka falceliya dareenka-iyo rabitaanka sameeyaha waxayna soo saaraan xanuun ama raaxo, farxad ama murugo, rajo ama cabsi, gaati ama mugdi. Dareennadani waa xusuus-celin wax-qabad oo ku saabsan xaalado raynrayn ama niyad-jab ay soo martay. Waxaa jira afar fasal oo sameeya-xusuusta: maskaxda-jirka, oo ah falcelinno dareen-iyo-damac ah dhacdooyinka jireed ee nolosha maanta; xusuusta maskaxda, taas oo ah falcelinta
dareen-iyo-rabitaan meelo iyo waxyaabo, diidmo ama diidmo, taas oo ay ugu wacan tahay xaalado isku mid ah oo lagu soo maray noloshii hore; Xusuus-maskaxeed, maskaxeed, oo khuseeya su'aalaha sax ama qalad ama xallinta dhibaatooyinka maskaxda ama
dejinta xaaladaha lama filaanka ah ama lama filaanka ah ee nolosha; iyo xusuusta nafsaaniga ah, ee khuseeya aqoonta aqoonsiga, markii waqtigu ka idlaado daqiiqad isla markaana qofka wax qabanayaa uu ku baraarugsan yahay go'doonkiisa aqoonsiga aan waqtiga lahayn
iyada oo aan loo eegin nolosha iyo geerida ay soo martay.
Xusuusta, Sense-: waxay ku lug leedahay (a) xubnaha isha, kamarad ahaan sawirka laga qaadayo; (b) dareenka aragtida ee aragtida iyo diiradda la saarayo; (c) taban ama saxanka sawirka lagu cajabinayo ee laga soo saarayo sawirka; iyo (d) kan sameeya diiradda oo sawir qaada. Qaybaha aragga waa aaladda makaanik ee loo adeegsado aragtida. Aragga waa unugga dabeecadda aasaasiga ah ee loo adeegsado in lagu soo gudbiyo aragtiyaha ama sawirka diiradda lagu saaray qaabka neefta-qaab. Sameeyuhu waa wax arkaya oo u arka sawirka inuu diiradda saarayo qaabkiisa neefta. Taranka ama xusuusta sawirkaas waa mid otomaatig ah oo si farsameysan loogu soo saari karo iyadoo lala xiriirinayo shayga la xusuusto. Nidaam kasta oo kale oo maskaxeed wuxuu farageliyaa ama ka hortagaa taranka ama xusuusta fudud. Sida dareenka aragga iyo xubnihiisu wax u arkaan, ayay la mid tahay maqalka iyo dhadhanka iyo urta, iyo soo-saaristoodu xusuus ahaan. Araggu waa xusuusta indhaha ama sawirka; maqalka, maqalka maqalka ama codka; dhadhamin, xusuusta gustatory; iyo ur, udgoonkii xusuusta.
Muuqaalka Maskaxda iyo Dejinta Maskaxda:Aragtida maskaxeed ee qofka waa aragtida qofka ee nolosha; waa sidii jawi ujeeddada guud laga leeyahay inay noqoto ama yeelato ama yeelato wax. Mawqifkiisa maskaxeed waa habka gaarka ah ee loola jeedo noqoshada ama sameynta ama haysashada wax kastoo wax ay yihiin, kaas oo lagu go'aamiyo laguna keeno feker ahaan.
Hawlgallada Maskaxda: waa habka ama dariiqa ama shaqaynta mid ka mid ah saddexda maskaxood ee uu adeegsado qofka jidhka ku jira.
Cudurka metempsychosis: waa mudada ka dib markuu sameeyahu ka baxo Hoolka Xukunka iyo qaabka neefta, oo uu ku jiro kuna dhex maro habka daahirinta, halkaas oo uu ku kala soocayo kuwa rabitaankiisa keena dhibaatada, iyo rabitaankiisa wanaagsan ee ka farxiya. Metempsychosis wuxuu dhammaadaa marka tan la sameeyo.
Mind: waa shaqeynta caqliga-arrinta. Waxaa jira toddobo maskaxood, taas oo ah, toddobo nooc oo feker ah oo ay qabaan Triune Self, oo leh Iftiinka Sirdoonka, - waa isku mid. Dhammaan toddobada nooc waa in lagu dhaqmaa hal mabda ', oo ah, in si joogto ah Iftiinka loogu hayo mawduuca fikirka. Waxay kala yihiin: maskaxda I-ness iyo maskaxda isxilqaanka aqoonta; maskaxda saxda ah iyo maskaxda sababta fekerka; maskaxda dareenka iyo maskaxda rabitaanka qofka sameeya; iyo maskaxda jirka taas oo sidoo kale u sameeyahu u adeegsado dabeecadda, iyo dabeecadda oo keliya.
Ereyga “maskax” waxaa halkan loo adeegsadaa shaqadaa ama hawshaas ama shaygii lagu qabtay ama lagu fikiray. Waa erey guud oo halkan loogu talagalay toddobada maskaxood, mid walbana toddobada ka mid ahi waa sababta dhinaca fikirka ee 'Triune Self'. Fikirka waa qabashada joogtada ah ee Iftiinka Miyir-qabka ee mawduuca fikirka. Maskaxda I-ness iyo maskaxda isxilqaan waxaa u adeegsada labada dhinac ee aqoon u leh Triune Self. Maskaxda saxda ah iyo maskaxda caqliga waxaa isticmaala fekerka 'Triune Self'. Dareenka-maskaxda iyo rabitaanka-maskaxda iyo jirka-maskaxda waa in loo adeegsadaa ficilku: labada ugu horeysa si loo kala saaro dareenka iyo rabitaanka jirka iyo dabeecadda iyo in lagu yeesho midow isu dheelitiran; maskaxda jirka waa in loo adeegsadaa afarta dareemayaal, jirka iyo xiriirka dabiiciga.
Mind, Body-: Ujeedada dhabta ah ee maskaxda-jirka waa adeegsiga dareenka-iyo-rabitaanka, daryeelka iyo xakameynta jirka, iyo iyada oo loo marayo jirka si loo hago loona xakameeyo afarta adduun iyadoo loo marayo afarta dareen iyo xubnahooda jirka. Maskaxda-maskaxdu waxay ka fikiri kartaa oo keliya iyada oo loo marayo dareenka iyo ereyada ku xaddidan dareenka iyo arrinta dareenka leh. Halkii laga xakamayn lahaa, maskaxda-jirka ayaa xukunta dareenka-iyo-rabitaanka si aysan awood ugu lahayn inay kala soocaan jirka, maskaxda jidhkuna waxay ku adkaataa fikirkooda oo waxay ku qasban yihiin inay ka fikiraan xagga dareenka halkii ay ka ahaan lahaayeen shuruudaha ku habboon dareenka-iyo-rabitaanka.
Mind, Dareenka-: waa taas oo dareenku ku fikiro, iyadoo loo eegayo afarta hawlood. Kuwani waa garasho, maskax-furnaan, qaab dhismeed, iyo firfircoonaan. Laakiin halkii aad uga isticmaali lahayd kuwan xoriyadda addoonsiga dabeecadda, waxaa lagu xakameynayaa iyada oo loo marayo maanka-jirka dabeecadda iyada oo loo marayo afarta dareen: aragga, maqalka, dhadhanka, iyo urta.
Mind, Desire-: rabitaankee ah inay u adeegsato edbinta iyo xakamaynta dareenka iyo nafteeda; in loo kala sooco sida rabitaanka jirka ay ku jirto; iyo, in la keeno midowga naftiisa dareen; waxay leedahay, taa bedelkeeda, u ogolaatay nafteeda inay ka hoosayso oo ay maamusho maskaxda-jirka iyadoo u adeegaysa dareenka iyo walxaha dabiiciga ah.
Noocyada: waxaa lagu go'aamiyaa illaa heerka in qofka dareenkiisa iyo rabitaankiisa ay hagaan codka damiirka aan codka lahayn ee qalbiga ku saabsan waxa aan la sameyn, iyo xukunka caqliga saliimka ah, ee ku saabsan waxa la sameynayo. Markaa, iyadoon loo eegin soojiidashada dareenka, dabeecadda qofka waxay noqon doontaa mid toosan oo sax ah, iyadoo la tixgelinayo naftiisa iyo tixgelinta dadka kale. Akhlaaqda qofka ayaa noqon doonta asalka qofka maskaxdiisa.
Feejignaanta: waa aaminaad ama dadaal loogu jiro wadaagista Ilaah, adoo ka fiirsanaya ama la kulma u dhowaanshaha, joogitaanka ama la hadalka Ilaah. Mystics waa ummad kasta iyo diin kasta, qaarna ma laha diin gaar ah. Hababkooda ama dhaqankoodu wuxuu ku kala duwan yahay aamusnaanta aamusnaanta illaa jimicsiga jireed ee rabshadaha leh iyo dhawaaqyada iyo ka soocista shakhsi ahaaneed ilaa banaanbax ballaaran Mystics-ku badanaa waa kuwo daacad ka ah ujeedooyinkooda iyo waxa ay aaminsan yihiin waana kuwo ku kalsoon cibaadadooda. Waxaa laga yaabaa inay ku soo baxaan ecastasy lama filaan ah oo ay gaadhaan meelo dhaadheer, oo ay ku dhacaan qoto dheerida niyadjabka; waayo-aragnimadooda waxay noqon karaan kuwo kooban ama dheereeya Laakiin kuwani waa uun khibradaha dareenka iyo rabitaanka. Maaha natiijooyinka fekerka cad; aqoon uma laha. Waxa ay u haystaan ​​inay yihiin aqoonta Eebbe ama u dhowaanshaha Eebbe waxay si aan kala go ’lahayn ugu xiran yihiin walxaha aragga, maqalka, dhadhanka ama urta, kuwaas oo ka mid ah dareenka - aan ahayn Is-ahaanta, ama Sirdoonka.
Dabeecadda: waa mashiin ka kooban guud ahaan unugyada aan caqliga lahayn; unugyo miyir qaba sida shaqooyinkooda oo keliya.
Baahi: waa qaddar, ficil ku qasbaya, badiyaaaba isla markiiba, oo aan looga baxsan karin ilaahyo iyo rag toona.
Noin: Waxa aqoonta leh ama la xidhiidha aqoonta.
Number: waa mid, guud ahaan, sida wareega, oo dhammaan tirooyinka lagu daro.
Tirooyinka: waa mabaadii'da ah, joogtaynta iyo xidhiidhka midnimada, midnimada.
Mid: waa unug, midnimo ama guud ahaan, asalka iyo ku darista dhammaan tirooyinka qaybihiisa, marka la dheereeyo ama la dhammeeyo.
Midnimo: waa xiriirka saxda ah ee dhammaan mabaadiida iyo qeybaha
midba midka kale.
opinion: waxaa xukunka lagu dhawaaqayaa kadib tixgelinta tixgalinta dhammaan dhinacyada maaddada la isweydiinayo.
Fursad: waa wakhti ku habboon ama habboon ama xaalad habboon ama meel ficil lagu dhammayn karo ujeedo kasta oo si gaar ah u khuseeya baahiyaha ama rabitaanka dadka.
Xanuun: waa nooc ka mid ah dareennada khalkhaliya sida ciqaabta fikirka qaldan ama qabashada, waana ogeysiiska loo adeegsaday qofka samaynaya dareenka-iyo rabitaanka inuu ka saaro sababtiisa.
Dareen: waa kacsanaanta dareenka iyo rabitaannada ku saabsan walxaha ama mawduucyada dembiyada.
Dulqaad: deganaansho iyo u-dulqaadasho taxaddar leh xagga fulinta hamiga ama ujeeddada.
Jirka Dhismaha Jirka: waa gobolka ama xaaladda taas oo ah tan ugu dambaysa, dhammaystiran; oo aan waxba laga waayi karin, waxna lagu dari karin. Kani waa jirka jir ahaaneed ee jinsi ahaanta ee Triune Self ee Boqortooyada
Qofka: waa jiritaanka jirka bini aadamka, maaskaro, iyo gudaha taas oo qofka iskuxiran ee rabitaanka-dareenka uu ku fikiro kuna hadlo waxna ku dhaqmo.
Hanjabaad: waa dabeecad maskaxeed oo ay soo saartay aragtida ama aaminsanaanta in rabitaanka aadanuhu uusan qancin karin; in dadka iyo duniduba ay ka wada baxaan; iyo, inaanu jirin wax laga qaban karo.
Qorshee: waa midda muujinaysa habka ama habka ujeeddada ujeedadu tahay.
Farxad: waa qulqulka dareenka oo waafaqsan heshiisyada dareenka, iyo qancinta dareenka-rabitaanka.
Gabay: waa farshaxanka lagu daydo macnaha fikirka iyo laxanka qaababka ama kalmadaha nimcada ama awooda.
Barta, A: waa mid aan cabbir lahayn laakiin xaggee ah Ujeedka ayaa ah bilowga wax walba. Kuwa aan caddayn iyo kuwa la muujiyey waxaa loo kala qaybiyaa dhibic. Sharaxaadda aan muuqan ayaa lagu muujiyaa dhibic. Waxa la muujiyey wuxuu ku noqonayaa mid aan muuqan iyada oo loo marayo dhibic.
Karti: waa isku dheelitirka, isku duubnaanta maskaxda iyo xakameynta jirka, taas oo qofku ku fekero oo dareemayo kuna dhaqmo si fudud, oo aan ku mashquulin duruufaha ama xaaladaha, ama fikradaha ama falalka dadka kale.
Haysashada yihiin daruuriga sida cuntada, dharka, hoyga, iyo waxyaabaha lagu ilaaliyo shakhsiyadda qofka booskiisa nolosha; intaas iyo in ka badanba marka laga eego iyo kuwa kaleba waa dabinno, dano, iyo silsilado.
Awooda, Aqoonta: waa rabitaan, kaas oo isbadala laftiisa, ama sababa isbedel waxyaabo kale.
Pranayama: waa eray Sanskrit ah oo ku xiran fasiraad badan. Ficil ahaan loo adeegsaday waxaa loola jeedaa xakamaynta ama qawaaniinta neefsashada ee layliyo loo qoondeeyay ee neefsashada, hakinta, neefta, hakinta, iyo markale neefsashada tiro cayiman oo wareegyada noocaas ah ama wakhti cayiman ah. Yoga Sutras ee Patanjali, pranayama waxaa loo bixiyaa kaalinta afaraad ee sideed tallaabo ama marxaladaha yoga. Ujeedada pranayama ayaa lagu sheegay inay tahay xakamaynta prana, ama xakamaynta maskaxda ku foogan. Si kastaba ha noqotee, ku dhaqanka pranayama wuu jahwareeriyaa oo wuu ka adkaadaa ujeedada, sababtoo ah fekerka waxaa loola jeedaa ama neefsashada ama prana, iyo joogsiyada neefsashada. Fikirkan iyo joojinta neefsashada ayaa ka hortageysa fakarka dhabta ah. Iftiinka Miyir-qabka ee loo adeegsaday fekerka — si loogu muujiyo fekerka mawduuca fekerkiisa - ayaa laga ilaaliyaa socodka iyadoo la joojinayo socodka dabiiciga ah iyo joogtada ah ee neefsiga jirka. Iftiinka Miyir-qabka ah wuxuu galaa oo keliya labada qodob ee dhexdhexaadka ah ee u dhexeeya neefsashada iyo qashin-qubka iyo qubashada iyo neefsashada. Joojinta ayaa celisa Iftiinka. Sidaa awgeed, Nal ma leh; feker dhab ah maleh; ma jiro yoga ama midow dhab ah; aqoon dhab ah ma leh.
Xulasho: waa nimcada qof, meel ama shay dareen iyo rabitaan, iyadoo aan loo eegin qumman ama sabab; waxay ka hortagtaa aragtida maskaxda ee dhabta ah.
Caadi ahaan: wuxuu xukumaa qof, meel ama shay ay ka soo horjeedaan dareen-iyo rabitaan, iyadoon tixgelin la siinin, ama aan loo eegin, xaq ama sabab. Cunsuriyaddu waxay ka hortagtaa xukun sax ah.
Mabda ': waa mabda'a laga soo qaatay dhamaan mabaadi'da ay yihiin iyo waxa lagu kala saari karo.
Xeerka, A: waa aasaaska wax kasta oo ay ahayd, kaas oo ay u noqotay waxa ay tahay, iyo iyada oo taas oo dabeecaddeeda lagu garan karo meel kasta oo ay ku taal.
Horumarka: waa sii wadista korodhka awooda miyir-qabka, iyo awoodda aad u adeegsan karto midka mid miyir qabo.
Ciqaab: waa ciqaabta ficil qaldan. Looguma talogelin inuu ku xanuunsado silica iyo silica qofka la ciqaabay; waxaa loogu talagalay in lagu baro qofka la ciqaabayo inuusan wax khalad ah sameyn karin isagoon silcin, waqti dhow ama daahid, cawaaqibka khaladka
Ujeeddo: waa ujeedada hogaanka u ah dadaalka sida ugu dhaqsiyaha badan, oo midkasto ama dadaalka ugu dambeeya ee la ogaanayo; waa jihada qunyar socodka ah, ujeedada ereyada ama ficilka, dhammaystirka fikirka iyo dadaalka, dhamaadka dareenka.
Tayada: waa heerka ugu wanaagsan ee lagu horumariyo dabeecadda iyo shaqeynta shay.
Xaqiiqda, A: waa unug sida ay tahay, oo aan la xirin, sheyga laftiisa; wixii qofku dareemayo ama ka warqaba, gudaha gobolka ama diyaaradda uu ku yaal, isagoo aan tixgelin ama la xiriirin wax kale oo aan ahayn.
Xaqiiqda, Qaraabo: sii wadida xaqiiqooyinka ama waxyaabaha iyo xiriirkooda midba midka kale, gobolka iyo diyaaradda lagu arko.
Runta, Ultimate: Miyir-qabka, isbeddel la’aan iyo gebi ahaanba; Joogitaanka Miyir-qabka ee mid kasta iyo nooc kasta oo dabiici ah iyo Isku-jir Saddex ah iyo Sirdoon waqti iyo meel bannaan oo weligeed ah, inta lagu gudajiro horumarka joogtada ah ee horumarka joogtada ah illaa heerarka sare ee miyir-qabka illaa ay ka mid tahay .
Dareenka Joogtada ah, The: wuxuu baabi'iyaa Phantasmagoria ee adduunkan bini-aadamka ee dhalashada iyo geerida, sida qorraxdu uga buuxdo hawada aan u neefsanno. Laakiin bini-aadamku wuu arkaa oo fahmaa boqortooyada wax ka badan inta aan aragno ama fahanno iftiinka qoraxda. Sababtuna waxay tahay dareenka iyo garashadu waa isku-dheelitirnaan, oo aan lagu baraneynin waxyaalaha waqtiga iyo geeridu aysan saameyn ku yeelan karin. Laakiin Boqortooyada Joogtada ahi waxay kor u qaaddaa oo ka ilaalisaa adduunka bini aadamka baabi'inta burburka, sida iftiinka qoraxda u leeyahay nolosha iyo koritaanka waxyaalaha nool. Qofka miyirka leh ee jirka ku jira ayaa fahmi doona oo fahmi doona Dareenka Joogtada ah sida uu u fahmayo ugana kala sooco jirka isbeddelka uu doonayo iyo dareenkiisa iyo fikirkiisa.
Sababta: waa falanqeeyaha, garsooraha iyo garsoorka; maamulaha caddaaladda sida tallaabada aqoonta ee waafaqsan sharciga ee xaqnimada. Waa jawaabta su'aalaha iyo dhibaatooyinka, bilowga iyo dhamaadka fikirka, iyo hagaha aqoonta.
Dib-u-noolaanshaha: waa qeybta wax qabad ee ka tagaya qeybaha kale ee lafteeda, iskeed, inay dib uga sii noolaato nafteeda, dabeecadda, marka jirka xayawaan bini aadamka loo diyaariyey oo loo diyaariyo inuu galo oo uu ku noolaado nolosha jirkaas. Jidhka xayawaanka waxaa loo diyaariyey iyadoo la tababbarayo si ay uga dhigto adeegsiga caqligiisa, socodka, iyo ku celinta ereyada loo tababaray inay adeegsato. Taasi waxay ku dhacdaa, sida dhir, inta ay weli tahay xayawaan. Waxay noqotaa bini-aadam isla marka uu caqli yeesho, sida lagu muujiyey su'aalaha ay isweydiiso, iyo waxa ay fahmayso.
Dib u soo nooleynta: waa dib u noqoshada jiilka, taranka jirka. Tan macnaheedu waxaa weeye: unugyada jeermiska ee jirka waxaa loo isticmaalaa in aan jidh kale la keenin dunida laakiin waa in la beddelo oo jirka la siiyo nidaam nololeed cusub oo sareeya. Tani waa mid ka mid ah dib-u-dhiska jirka oo ka imanaya jirka lab ama dhedig ee aan dhammaystirnayn jirka oo dhammaystiran oo dhammaystiran jidh ahaaneed oo jinsi ah, kaas oo lagu dhammaystiray madadaalo la'aan fikradaha galmada ama ka fikirka falalka galmada; iyo fikirka maskaxda ee joogtada ah si loo cusbooneysiiyo qofka jirkiisa xaaladdii asalka ahayd ee asalka ahayd ee uu ka yimid.
Xiriir: waa asalka iyo isuduwidda midnimada aasaasiga ah kaas oo dhamaan unugyada dabiiciga ah iyo unugyada caqli-yaqaanka ah iyo caqliga ay ku xiran yihiin Xasiloonida Samense.
Diinta: waa dhexda mid ama dhammaan afarta shey ee dabeecadda, sida dab ama hawo ama biyo ama dhul, iyada oo loo marayo dareenka jirka ee aragga, maqalka, dhadhanka, ama urta, taas oo haysa ama xira qofka samaynaya miyir-qabka jirka. dabeecadda. Tan waxaa lagu sameeyaa caabudida iyo ficillada cibaadada iyo qurbaannada la gubo iyo heesaha iyo rushaynta ama biyo ku maydhista iyo fooxa loo sameeyo hal ama dhowr ilaah oo ah waxyaalaha dabka, hawada, biyaha, ama dhulka.
Masuuliyadda: waxay kuxirantahay awooda lagu garto waxa saxda iyo khalada; Waa ku tiirsanaanta iyo aaminaadda qofka lagu meelayn karo inuu sameeyo dhammaan wixii uu hore u soo maray iyo kan hadda joogo, ama mustaqbalkuu samaynayaa, isaga ayaa mas'uul ka ah. Mas’uuliyaddu waxay kujirtaa daacadnimo iyo run sheegid, sharaf iyo aaminaad iyo astaamo kale sida inay yihiin dabeecad adag oo cabsi leh, oo ereygiisu aad uga kalsoon yahay midka qandaraas sharci ah.
Kicinta: waxay leedahay macne laba laab ah. Midda koowaad waa isu-soo-baxa afarta dareenka iyo isku-duwayaasha jirka ee noloshii hore, kuwaas oo loo qaybiyay dabiicadda geeridiisa ka dib, iyo dib-u-dhiska iyada oo loo marayo qaab-neefsi ah oo jidh cusub u adeegta sidii ay ugu noolaan lahayd guriga yeelo markay ku soo noqoto nolosha dhulka. Micnaha labaad iyo macnaha dhabta ahi waa in qofka samaynaya jirka ama haweeneyda uu dib u soo nooleeyo jirka galmada kana soo baxa jirka ama haweeneyda aan dhameystirneyn taas oo ah, jirka meesha waxyaabaha aasaasiga u ah labada jinsi ay ku midoobeen hal jir oo dhameystiran oo dib loo soo nooleeyo, dib loo soo nooleeyo. , xaaladdiisii ​​hore iyo tii asalka ahayd iyo dhimashadii aan kaamil ahayn.
Aargudasho waa rabitaan gaajaysan si loogu dhaawaco qof kale aargudasho iyo sidii ciqaab loogu helo qaladkii saxda ahaa ama loo malaynayay, iyo inuu qofku qanco rabitaanka aargudashada.
Laxanka: waa dabeecada iyo macnaha fikirka lagu muujiyey cabirka ama dhaqdhaqaaqa cod ama qaab, ama astaamo qoran ama ereyo.
Xaqa: waa wadarta aqoonta ee midka uu yahay mid miyir qabo, sida uu xukunka uga socdo gudaha.
Xuquuqda: waa heerka fikirka iyo ficilka, sida sharciga farayo iyo qaanuunka anshaxa, qofka sameeya dareenka iyo rabitaanka jirka. Waxay ku taal wadnaha.
Murugo: waa niyad-jabka dareenka iyadoo la adeegsanayo fikirka dadban.
Naftaada, Kan ugu sarreeya: waa rabitaanka ama damacyada aadanaha uu ogyahay inuu ka sareeyo, kan ka sareeya, kana sareeya kuwa xasaasiga ah, jidhka, wax aan yarayn iyo rabitaankiisa nolosha ee nolol maalmeedkiisa. Nafta sare ma aha mid laga soocayo
rabitaanka aadanaha, laakiin aadanaha wuxuu u maleeyaa inuu yahay naftiisa sarreeye maxaa yeelay, rabitaan ahaan, si lama-filaan ah ayey ula xiriirtaa is-weynaanta shakhsiyadda yaqaanna 'Saddex-aragnimadiisa', sidaa darteed isha dhabta ah ee qofku uu u qabo "Kan ugu sarreeya."
Is-khiyaanayn: waa gobolka ay ku kacayso inuu falaa naftiisa asaga oo u ogolaanaya soo jiidashada ama diidmada, doorbidashada ama nacaybka, inuu saameyn ku yeesho fikirka.
Is-qadarin: waa aqoonta lafteeda sida aqoonta uu u leeyahay Self Triune.
Dareenka: waa xiriirinta iyo aragtida unugyada dabeecadda ee dareemida, iyada oo loo marayo dareenka iyo dareemayaasha jirka, taas oo keenta dareen, shucuur, rabitaan. Dareenku maaha dareen, shucuur, ama rabitaan. Jirka la'aanteed, dareenku ma laha wax dareen ah. In kasta oo dareenku ka dhex jiro jirka waxaa jira qulqulka joogtada ah ee unugyada dabeecadda oo ka soo baxa dareenka una gudbaya jirka sida dareenka ah ee dareemka, xoogaa sida muuqaalka qalin warqad ah. Sida qalin la'aan iyo warqaddu ma jiri lahayn bog daabacan, sidaa darteed la'aanteed durdurrada unugyada dabeecadda oo aan dareemeyn lahayn wax dareen ah ma laha. Dhamaan xanuunka iyo raaxada iyo shucuurta, dhamaan farxadda iyo rajada iyo cabsida, murugada, calool xumada iyo rajo beelku waa dareen, natiijooyinka aragtiyada laga helo dareenka, iyadoo lala xiriiro unugyada dabeecadda. Sidaas oo kale jawaabihiina waa rabitaanno dareenka laga muujiyo dareenka, sida shaqsi ahaanta, cabashada, damaca, damaca, damaca, damaca, ama damaca. Laakiin rabitaanka laftiisa iyada oo aan jirku ka mid ahayn kuwan, wax aan ka badanayn dareen ayaa ah aragtida laga helo taabashada ay la leedahay unugyada dabeecadda.
Muuqaalada jirka: waa danjirayaasha dabeecadda ee maxkamadaha dadka; wakiilo ka kooban afarta shey ee waaweyn ee dabka, hawada, biyaha, iyo dhulka, kuwaas oo si gaar ah loogu qeexay aragtida, maqalka, dhadhanka, iyo urta jirka bini aadamka.
Xukunka waa fikir lagu muujiyey dareen iyo fikir la xiriira qof, goob ama shay.
Xukunka waa hoos u dhigga dareenka dareenka beenta ah.
Jinsiyada: waa ku takri falista dabeecadda fikradaha rabitaanka iyo dareenka taasoo keenta jirka ragga iyo dumarka.
Kacsiga: waa xaalada hypnotic ee dareenka iyo rabitaanka jirka bini aadamka oo la kulma qaabab iyo wejiyada dabiiciga-waalan ama sarkhaca dabeecadda.
Aragtida: waa unug dabeed, u shaqeysta danjiraha sheyka dabka ee dabeecadda jirka bini-aadamka. Sight waa kanalka loo adeegsado shebekadda dabka ee dabeecadda iyo nidaamka dhalinta ee jirka u dhaqmo kuna falceliso midba midka kale. Sight waa unugga dabeecadda kaasoo xiriiriya isla markaana isku xiraya xubnaha nidaamka dhalinta iyo howlo ahaan marka loo eego xiriirka saxda ah ee xubnaha.
Aamusnaanta: waa aqoonta dib loo soo celiyo: deganaansho miyir la’aan dhaqdhaqaaq ama cod.
Dembiga: waa fekerka iyo sameynta waxa qofku ogyahay inuu khaldan yahay, kasoo horjeedka qummanaanta, waxa qofku ogyahay inuu sax yahay. Ka tagitaan kasta oo waxa qof og yahay inuu qumman yahay, waa dembiga. Waxaa jira dembiyo ka dhan ah nafsaddaada, kuwa kale iyo dabeecadda. Ciqaabta dembigu waa xanuun, xanuun, silic, iyo ugu dambayn geeri. Dembiga asalka ahi waa fikirka, waxaana ku xiga ficil galmo.
Xirfadaha: waa heerka farshaxanka ee muujinta waxa qofku ku fikiro iyo waxa uu doonayo iyo waxa uu dareemayo.
Hurdada: waa u fasaxista dareenka iyo rabitaanka sameeyaha, nidaamka dareemayaasha iyo afarta dareeme ee jirka, iyo inuu isaga fariisto hurdada riyooyinka. Sii daynta waxaa keenaya hoos u dhigida waxqabadka jirka maxaa yeelay waxay ubaahantahay nasiino, dabeecadda in la dayactiro wasakhda, iyo in la diyaariyo jirku inta uu maqanyahay. Markaa kadib wax qabadku ma taabto dabeecadda mana arki karo, maqli karo, ma taaban karo ama urin karo.
Urta: waa unug ka mid ah walxaha dhulka, wakiilka aaladda dhulka ee jirka aadanaha. Ell Selliddu waa dhulka ay ku dul nool yihiin unugyada dabeecadda iyo nidaamka dheef-shiidka ee jirku ku kulmaan oo ay la xiriiraan. Ficillada aragga ee maqalka, ficillada maqalka iyada oo loo marayo dhadhamin, dhadhannada waxqabadka urka, tabaha jirka urta. Indhuhu waa holac, dhago cufan leh, dhadhan biyo leh, oo ur urta carrabka adag ee dhulka. Urta ayaa aasaas u ah saddexda dareen ee kale.
Somnambulism: waa socodku inta lagu jiro hurdada dheer, hurdada wax qabadkiisu waa hurdo hurdo ah, iyo, mararka qaarkood, sameynta fekeryo ah in uusan somnambulist isku deyi doonin intuu soo jeedo. Somnambulism waa natiijada fikirka dadban iyadoo la soo jeedo; iyo fikirka noocan ah ee dareenka ah wuxuu muujiyaa aragti qoto-dheer qaab-neefsashada. Kadibna mararka qaarkood hurdo qoto dheer oo lagu riyoonayo gobolka soo kacaya waxaa si toos ah loogu fuliyaa qaab-neefsi, sida ku xusan qorshaha uu qoro somnambulist.
Somnambulist, A: waa nin lugeynaya hurdo, mid mala awaal ah oo jirkiisa astur iyo qaabkiisu yahay qaab soojiidasho leh lana soo jeedin karo; mid ka fikiraya wuxuu jeclaan lahaa inuu sameeyo laakiin ka baqay inuu sameeyo. Waxyaabihii uu ka fikiray ee ku riyoonaya riyo maalmeedka gobolka soo jeedda ayaa markii dambe taabanaya qaabkiisa neefsashada inta lagu jiro hurdada. Laakiin, markuu soo toosiyey, isagu garan maayo waxa jirkiisa loo dhigay inuu hurdo.
Soul: Waxyaabaha aan dhamaadka lahayn ee diimaha iyo falsafada, mararka qaar la sheego inay yihiin kuwo aan dhimanayn iyo waqtiyo kale oo la sheego inay geeri ku sugan yihiin, kuwaas oo asalkooda iyo aayahooda si kala duwan looga hadlay, laakiin had iyo jeer caawimaad u ahayd inay ka mid noqdaan ama xidhiidh la yeeshaan aadanaha jirka. Waa qaab ama dhinaca dadban ee neefta-u ah qaab kasta oo bina-aadam ah; dhinaceeda firfircoon waa neefta.
Booska: waa walax, weligiis aan la muujin oo miyir la'aantu, taasi waa asalka iyo meesha wax kasta oo la muujiyay. Waa xad la'aan, qaybo, gobollo ama cabbir. Waa iyada oo loo marayo cutub kasta oo dabeecadeed, oo ay ku jiraan dhinac kasta oo jira oo dhaman dabeecaduhu u socdaan oo ay lahaanayaan.
Ruux waa dhinaca firfircoon ee cutubka dabiiciga ah oo dhiirigeliya kana shaqeynaya dhinaca kale ama midka kale ee lafdhabarka ah, oo loo yaqaan arinta.
Sihiin:. Caadi ahaan loo yaqaan 'spiritualism', waxay la xiriirtaa dabeecadda bey'adda ama waxyaabaha aasaasiga u ah dabka, hawada, biyaha, iyo dhulka, iyo mararka qaarna qaybaha camal falaha aadanaha ee ka tegey nolosha dhulka. Kuwaani badiyaa waxaa lagu arkaa ama lagula socodsiiyaa iyada oo loo marayo meel dhexe. Muuqaalka, muuqaalka kore ee jirka ama iftiinka jirka ee dhexdhexaadka waa shay ama qaab loo isticmaalo midka tegay muuqan, iyo walxaha ka socda jirka dhexdhexaadka ah iyo qeyb ka mid ah jirka dusha eegaya ayaa laga yaabaa in la sawiro si loo muujiyo muuqaalka jirka iyo culeyska . Marka loo eego jahliga iyo khiyaanada ku xiran astaamaha noocan ah ee qaybaha, qeybaha qofka dhintay wuu ku soo laaban karaa oo u muuqan karaa qalab dhexdhexaad ah.
Maandooriyaha: waa bannaan aan xad lahayn, oo aan lahayn qaybo, isku-dhejisan, isku mid ah, dhammaantood oo "ku leh wax aan jirin," miyir la'aanta, taas oo ah, si kastaba ha ahaatee, waxay soo bandhigeysaa dabeecadda oo dhan.
Guul: waxay ku jirtaa fulinta ujeeddada.
Succubus: waa nooc dumar ah oo aan muuqan oo isku dayaya in ay damacdo ama xiriir galmo la yeelato nin inta lagu jiro hurdada. Sida guluubka, succubi waa labo nooc, waxayna ku kala duwan yihiin qaab iyo ujeedo. Cudurka loo yaqaan 'Incubi iyo' succubi 'looma dul qaadan karo marmarsiinyo kasta ha noqotee. Waxay sameyn karaan waxyeelo badan waxayna u horseedi karaan dhibaato aadane riyooyin aadanaha.
Calaamad, A:waa shay muuqaal ah oo matalaya mowduuc aan la arki karin taas oo mid ka mid ah ay tahay in laga fikiro, laftiisa ama mawduuca kale.
Dhadhan: waa qayb ka mid ah biyaha biyaha ee dabeecadda oo gaadhay ilaa heerka u-shaqaynta wasiir dabiiciga ah jidhka bini-aadamka. Dhadhamiya waa marinka ay ka kooban yihiin biyaha biyaha dabeecadda iyo nidaamka wareegga jirka ee ku dhex wareega midba midka kale. Dhadhamiya waa unugga dabeecadda kaasoo bilaaba isla markaana xiriiriya unugyada hawada iyo dhulka ee cutubyadooda biyaha si loogu diyaariyo wareegga iyo dheef-shiidka iyo xubnaheeda si ay u noqdaan dhadhamin.
Dareenka: Fikirka dhabta ah ee 'Triune Self' wuxuu udhaxee yaqaan yaqaankiisa iyo kan kudhaca jirka aadanaha. Waxay ku fakaraysaa maskaxda saxda ah iyo maanka caqliga. Shaki kuma jiro tuhunka iyo shakiga fikirkiisa, wax khilaaf ah oo ka dhexeeya xaqiisa iyo sababtiisa. Khaladaad kama samayso fekerkeeda; iyo waxay u maleyneyso inay mar un shaqeyneyso.
Wax-u-qabadka-jidhku waa mid is-bedbeddela oo aan degganayn xagga fikirka; dareenkiisa-iyo rabitaan-maskaxdiisu marwalba isma waafaqsana, fikirkoodana waxaa xukuma maskaxda jirka oo ka fikirta dareenka iyo walxaha dareemayaasha. Iyo, halkii laga heli lahaa Iftiinka cad, fikirka waxaa lagu sameeyaa badanaa ceeryaamo oo Iftiinka ayaa ku faafaa ceeryaanta. Haddana, ilbaxnimada adduunku waa natiijada fekerka iyo fikradaha sameeyey. Hadday qaar ka mid ah kuwa sameeya jirka bini'aadamka ay noqdaan kuwo miyir qaba inay yihiin wax aan dhimanayn oo ay yihiin, iyo inay xukumaan halkii ay ka maamuli lahaayeen, maskaxdooda jidhku, waxay markaas dhulka u rogi lahaayeen beer si kasta oo ka sarraysa muuqaalka janno.
Fikirka: waa joogteynta Iftiinka Niyad Jabka ee ku saabsan mawduuca fikirka. Waa hanaan (1) xulashada maaddada ama samaynta su'aal; (2) oo loo rogayo Nalka Iftiinka, oo lagu sameeyo iyada oo la siinayo feejignaan aan cidna la wadaagin; (3) adoo si joogto ah u xajinaya isla markaana diiradda saaraya iftiinka miyir-qabka ee mawduuca ama su'aasha; iyo (4) adoo keenaya Iftiinka si diirada loo saaro mowduuc ahaan. Markuu iftiinka miyirku ku foogan yahay barta, dhibicdu waxay u furnaan doontaa dhammaystiran aqoonta guud ee maaddada la xulay ama jawaabta su'aasha la soo diyaariyey. Fikirku wuxuu saameeyaa maaddooyinka iyadoo loo eegayo kartidooda iyo xaqsanaantooda iyo xoogga ay
Fikir, Hawl: waa ujeedadu tahay in laga fekero maaddo, waana dadaalka lagu hirgeliyo iftiinka Maqalka ee maadada, illaa inta mawduuca la yaqaan, ama illaa fekerka la mashquuliyo ama loo beddelo maad kale.
Fikradda, Dhaqdhaqaaqa: waa fikirka la sameeyo iyada oo aan wax ujeeddo ah oo la hubo lahayn; waxaa lagu bilaabaa fikirka duulista ama dareenka dareenka; Ciyaarta shaqo la’aanta ama riyo-maalmeedka oo ku lug leh mid ama dhammaan saddexda maanka ee kuwa sameeya nuurkaas
sida laga yaabo inuu ku jiro jawiga maskaxda.
Fikirka ah in aanu abuurin fikrado, Taasi, Daacadnimo: Muxuu qofku u malaynayaa? Wuxuu u maleynayaa in dareenkiisa uu ku qasbayo inuu ka fikiro, ku saabsan shayga dareenka, dadka iyo dhacdooyinka, iyo ficilkiisa. Iyo marka uu u maleeyo inuu doonayo inuu wax uun noqdo, inuu sameeyo wax, ama inuu helo ama uu helo wax. Wuxuu rabaa! Markuu doonayona wuxuu isku dhejiyaa naftiisa iyo Nuurka feker ahaan, wuxuu rabo; fikir buu abuuray. Taasi waxay ka dhigan tahay inuu Iftiinkiisa fikirkiisu ku xidhan yahay rabitaankiisa doonaya, arrinta iyo habka ficilka, ama shayga ama shayga uu doonayo. Fikirkaas ayuu ku xidhay oo isku xidhay Iftiinka iyo naftiisa. Dariiqa kaliya ee uu waligiis Iftiinka iyo naftiisa uga xoreyn karo xariggaas waa in aan la isku xidhin; taasi waa, inuu dheellitiro fikirka isaga xiraya, isagoo ka xoreynaya Nuurka iyo rabitaankiisa waxa ku jira rabto. Si tan loo sameeyo, waxay badanaa qaadataa nolol aan tiro lahayn, da ', si loo barto, loo fahmo; inuu fahmo inuusan u dhaqmi karin sidoo kale iyo si xor ah shayga uu ku xiran yahay kuna xiran yahay, sida uu awoodo haddii uusan ku xirneyn, uusan ku xirneyn. Rabitaankaagu waa adiga! Ficilka ama sheyga aad rabto adiga maahan. Haddii aad ku dhejiso oo aad naftaada ugu xirto fikir, ma shaqeyn kartid sidoo kale haddii aad tahay qof aan xarka lahayn oo xor u ah inaad wax qabato bilaa lifaaq. Sidaa darteed, fekerka aan abuurin fikradaha wuxuu ku jiraa xor u ahaanshaha fekerka, iyo inaanad rabin, haysan, hayn, laakiin ku dhaqaaqno, yeelano, qabato, iyadoon ku xidhnayn ficilka, waxa aad haysato, iyo waxa aad hayn Taasi waa, in lagu fekero xorriyadda. Markaa waxaad u fikiri kartaa si cad, Iftiin cad, iyo xoog.
Fikrad, A: waa noolaha dabiiciga ah, uuraysan yahay oo qalbigiisu ku kasbaday dareenka iyo rabitaanka Nalka Iftiinka, oo lagu sharraxay oo laga soo saaray maskaxda, kaas oo ku baabi'i doona ficil ahaan, shay ama dhacdo, mar kale iyo mar labaad, ilaa iyo inta waa isu dheelitiran. Waalidka sameynaya fikirka ayaa mas'uul ka ah dhammaan natiijooyinka ka soo baxa illaa fikirkaas uu isu dheellitiro; taasi waa, waaya-aragnimada laga soo qaatay xasuuqyada, barashada laga soo qaatay waaya-aragnimada, wax-qabad
wuxuu ka xoreeyaa Iftiinka iyo dareenka iyo rabitaanka shayga dabiiciga ah ee ay ku xidhnaayeen, oo aqoon buu ku helaa.
Fikrad, Is-barbardhig: Ka fikirida nuurka iftiinka fikirka marka dareen-iyo-rabitaan ay ku heshiinayaan midba midka kalena waxay ku heshiinayaan is-afgarad ku saabsan falka, shayga ama dhacdada oo ay goob joog ka ahaayeen I-ness. Markaa fekerku wuu wareejiyaa oo wuxuu dib ugu soo celiyaa Iftiinka jawigii hal-abuurnimada fikirkuna waa isku dheellitiran yahay, wuu joogsanayaa inuu jiro.
Fikradda, Ciladda isu dheellitirka ee a: waa astaamaha ay damiirka ku dhegan tahay fikirka oo ah shaabad diidmo ah oo loo aaneynayo waqtiga abuuritaanka fikirka dareenka iyo rabitaanka. Iyada oo loo marayo dhammaan isbeddelada iyo baabi'inta fikirka, calaamaddu waxay sii ahaaneysaa illaa iyo isu dheellitirka fikirkaas. Calaamadda iyo fikirku way baaba'aan marka fikirku isu dheellitiro.
Fikradda, Xukunka: Mid ka mid fikirka qofka ee waqtiga dhimashada waa fikirka xukunka ee nolosha soo socota ee dhulka. Waa la beddeli karaa, laakiin inta ay xukunto waxay saameyn ku leedahay fekerkiisa, waxay ka caawisaa xulista asxaabtiisa iyo hogaaminta
ama wuxuu ku barayaa dadka kale ee fikirka la midka ah. Waxay badanaa go'aan ka gaartaa doorashada xirfad ama ganacsi ama meherad uu ku raaci karo nolosha oo dhan. In kasta oo ay weli tahay xukunkiisa fikirka waxa ay ka xanaajisaa dabeecaddiisa iyo siin
midab u eegistiisa nolosha.
Fikradaha, booqashada: Fikradaha ayaa wareegaya; waxay u egyihiin sida waalidkood yihiin; Waxay ku booqdaan midba midka kale maskaxda maskaxda ee bini-aadamka, sababtuna tahay ujeedooyinka iyo walxaha loogu talagalay, waxayna ku kulmaan jawiga danaha la midka ah ee aadanaha iyaga uumay. Fikradaha ayaa ah sababaha ugu weyn ee kulanka iyo isu imaatinka dadka; Muuqaalka fikirradooda waxay dadka ku ururiyaan meel.
Time: waa isbeddelka unugyada ama qaybaha cutubyada ee xidhiidhkooda. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo dunida iyo gobolada kala duwan. Tusaale ahaan: qiyaasta cutubyada qoraya qoraxda, dayaxa, dhulka, isbeddel ku yimaada xidhiidhkooda, ayaa loo qiyaasay sida wakhtiga qorraxda, wakhtiga dayaxa, wakhtiga dhulka.
Socdaalka: waa habka raacaya isku xirnaanta jeermiga aadanaha iyo dheddigga qaab-dhismeedka qaab-neefsiyeed, nafta nafta mustaqbalka, markayrayso. Waa tahriibka iyo isu imaatinka guuleysan ee dhammaan
Waxyaabaha iyo nolosha iyo foomamka typal laga helo macdanta iyo khudradda iyo boqortooyooyinka xayawaanka oo loo qaybiyey dhimashadood ka dib, iyo la xiriirinta iyo iyaga u dhiska jidh cusub, abuur cusub, sida laga soo xigtay nafta, qaabka jidhku u leeyahay noqo, oo u diyaargarowga inuu ahaado degganaan jireed oo ku soo laabashada iyo dib-u-noolaashaha qayb ka mid ah Doomaha Saddex-adlaha. U guuritaanka xubnaha xubnuhu waxay ka kooban yihiin ama maraa boqortooyooyinkan
ee dabeecadda: macdanta ama aasaasiga, geedka ama khudradda, iyo xayawaanka, oo loo gudbaa ilmaha. Taasi waa dhammaadka wareejinta nafta, foomka, ee aadanaha, guud ahaan ama iyada oo loo marayo saddex boqortooyo oo dabiiciga ah qofka.
Self Triune: Is-Ogaanshaha aan la arki karin iyo Kan aan dhiman karin; aqoonsigiisa iyo qeyb aqoontiisa aqoon yahan; saxsanaanteeda iyo sababteeda sida fikir ahaan, ee Daa'imka ah; iyo, rabitaankeeda iyo qayb ahaan dareenkeeda sida wax qabad ahaan, marba marka ka dambaysa dhulka korkiisa.
Saddex-geesoodka ah ee Caalamka, The: waa aqoonsiga aduunka caanka ah ee “Triune Senty”, waxayna u taagan tahay laxiriirta Sirdoonka Sare sida Triune Self iyo Sirdoonkiisa.
Trust: waa aaminaada aasaaska u ah daacadnimada iyo runta dadka kale, maxaa yeelay waxaa jirta aaminaad qoto dheer oo qofka aaminka ah. Marka mid ka niyad jabo kalsoonida qaldan ee uu ku qabo qof kale, waa inuu
Yaanu lumin kalsoonida naftiisa, laakiin waa inuu bartaa taxaddar, ka taxaddar waxa iyo cidda uu isku halleeyo.
Runta:waa rabitaanka inaad ka fikirto oo aad si toos ah uga hadasho waxyaabaha iyagoon dooneyn inaad been ama been ka sheegto mowduuca laga wada hadlay ama laga hadlay. Dabcan, waa la fahamsan yahay in mid uusan ahayn in loo muujiyo
ujecel ama weydiiya dadka waxkastoo uu ogyahay.
Noocyada: Noocku waa bilowga ama bilowga foomka, foomkuna waa soo-gelinta iyo dhammaynta nooca. Fikradaha waa noocyada xayawaanka iyo walxaha waxaana loo qaabeeyaa muujinta dareenka aadanaha iyo rabitaanka shaashadda dabeecadda.
Fahanka: waa garashada iyo dareemka waxa ay naf ahaantooda yihiin, waxa ay xiriirkoodu yihiin, iyo fahamka sababta ay sidaas u yihiin iyo kuwa ay isku midka yihiin.
Cutubka, A: waa mid aan la qeybin karin oo aan dib loo soo celin karin, wareeg ah, oo leh dhinac aan la soo bandhigi karin, sida ka muuqata dhexroor jiifa. Dhinaca la muujiyey wuxuu leeyahay dhinac firfircoon oo dadban, sida lagu muujiyey khadka dhexe ee qotoma. Isbedelada lagu sameeyay isdhexgalkooda waxaa saameyn ku leh joogitaanka dadka aan la soo bandhigin labadaba. Cutub kastaa wuxuu leeyahay awood u lahaanshaha inuu noqdo mid leh xaqiiqada ugu dambeysa — Miyir-qabka - iyadoo ay si joogto ah ugu sii socoto miyir qabka waligeed
Cutubyo: Tababarka iyo waxbarashadda cutubyadu waxay ku saleysan yihiin soo jeedinta in unug kasta oo dabeecadeed leedahay awood u yeelashada inuu noqdo Sirdoon. Waxbarashada waaxda waxaa lagu qabtaa Jaamacad sharciga ah. Jaamacadda sharciga ah waa
kaamil ah, jir ahaan jinsi ah oo aan caadi ahayn oo ah Caqliga Joogtada ah, kaas oo lagu xukumo qofka wax sameeya iyo kuwa fikirka leh iyo qof yaqaan Saddex-geesood ah oo dhammaystiran sida ku xusan Nidaamka Daa'imka ah ee Horumarka.
Waxbarashada unugyada aan caqliga lahayn ee dabeecadda waxay ka kooban tahay kororka ahaanshaha isku xigxiga ee miyir qabta iyada oo ah shaqadeeda iyada oo loo marayo darajo oo dhan ilaa ay aakhirka ka qalin jabiso Jaamacadda, si ay u noqoto unug caqli badan oo ka baxsan dabeecadda.
Darajooyinka ku jira jirka kaamil ahaana waa: unugyada ku meelgaarka ah, unugyada wax qora, iyo unugyada dareenka, ugu dambeyntiina waxaa jira unug qaab-neefsi ah, kaas oo ku jira tababbarka lagu soo qalin jebinayo dabeecadda oo noqda unug caqli leh oo miyir qaba. as lafteeda iyo of oo dhan
waxyaabaha iyo sharciyada. Unugyada Ku-meelgaarka ah waxaa iska leh isku-duwayaasha ka kooban una shaqeeya qaab dhismeedka dhammaan qeybaha sharciga ee Jaamacadda. Muddada ku-meelgaarka ah waxaa awood loo siiyaa oo loo dallacayaa sidii sharciyo waxaana loo diraa inay noqdaan sharciyada hawlgalka dabiicadda. Unugyada xasaasiga ah waa Safiirada ka socda qeybaha waaweyn ee dabka, hawada, biyaha, iyo dhulka, kuwaas oo loogu talagalay inay hagaan afarta habood - dhalid, neefsashada, wareegga dhiigga iyo dheef-shiidka oo ka kooban xubnaha
waa qaybo shaqeynaya. Unugga qaab-dhismeedka neefsashada wuxuu isku xiraa dareenka iyo nidaamyada iyo unugyada si ay u shaqeeyaan dastuurka jirka u shaqeynayo.
Qeybaha, Dabeecadda: waxaa lagu kala saaraa adigoo miyir qaba as hawlahooda kaliya. Unugyada dabeecadu ma warqabaan of wax kasta. Waxaa jira afar nooc: cutubyo lacag la'aan ah oo aan isku filneyn oo aan u baahnayn unugyo kale oo ballaaran ama qaab dhismeed ah; unugyada ku-meel-gaarka ah, oo ka kooban ama isku-habboon qaab ama dhisme muddo ah ka dibna sii gudbaya; unugyada wax qora, kuwaas oo sameeya oo qabta unugyo ku meelgaar ah in muddo ah; iyo unugyada dareenka, sida aragga, maqalka, dhadhanka, iyo urta, kuwaas oo xakameeya ama xukuma afarta nidaam ee jirka bini aadamka. Dhammaan unugyada dabeecadda waa kuwo aan caqli gal ahayn.
Unug, Xubin: Iyada oo loo marayo hal unug oo isku xidha unugyada unugyadu waxay kuxirantahay dhamaan unugyada ay unuggu ka kooban yahay, si ay u fuliso howlaheeda ama howlaheeda kuwaas oo ku xira xubnaha kale ee unugga afarta nidaam ee jirka. iska leh
Cutubyo, Sense: waa afarta unug ee isku xirka dabiiciga ee jirka kuwaas oo ku xira kuna xiriiriya afarta dareeme ee aragga, maqalka, dhadhanka, iyo urta, oo leh afarta nidaam: aragtida leh abuurista, maqalka neefsashada, dhadhanka wareega, iyo urta dheefshiidka; iyo, afarta cunsur: dabka, hawada, biyaha, iyo dhulka.
Wax aan micno lahayn: waa wax aan la arki karin oo aan qiimo lahayn oo kufilan dhammaan ashyaa'da ama xilalka iyo kalfadhiyada dunida laga doonayo, marka la barbar dhigo boqortooyada; waa fahamka faa'iido darrada halganka ee
ku raaxaysiga caannimada, iyo raynrayn iyo muuqaalka xaaladaha, marka awooddooda la barbar dhigo awoodda doonista ku dhaqanka ficilnimada iyo runta.
Cagaamada, Xirmooyinka: Halkan waxaa loogu yaqaanaa, waa sharrixumo iyo damacyo xunxun oo faqiil ah oo ku nool nolosha aadanaha oo, dhimashadiisa kadib ayaa keenta dhibaato halka kan wax qabanayaa uu isku dayo inuu ka sooco. Waxyaabaha aasaasiga ah sida xijaabka xun ayaa sidoo kale silica,
maxaa yeelay, iyagu ma haystaan ​​awood ay ku noolaadaan iyada oo aan jidhka bini'aadamka. Sidaa daraadeed inta badan waxay raadsadaan jawiga qof aadanaha sida rabitaankiisa leh oo raba inuu noqdo ama noqdo dhibbane damac ka sakhraansan ama dambi.
Fursad: waa awood, xoogga rabitaanka, ee ku dhaqanka daacadnimada iyo runta.
Will, Free: Dardaaranku waa rabitaanka ugu weyn, xilligan, waqti, ama nolosha. Waxay xukumaan damacyadooda iska soo horjeedda waxaana laga yaabaa inay xakameeyaan rabitaanka dadka kale. Rabitaanku waa awooda miyir-qabka ah ee gudaha, kaas oo isbadal laftiisa ku keeni kara ama waxyaabo kale beddela. Wax doonis ah oo aadanuhu ka jirin waa xor, maxaa yeelay waxay ku dhegan tahay ama iskeed iskugu dhejisaa walxaha dareenka markay ka fekerayaan. Hal rabitaan ayaa xakameyn kara ama lagu xakamayn karaa rabitaan kale, laakiin damac ma beddelayo rabitaan kale ama lagu qasbi karo inuu is beddelo. Awood kale oo aan ahayn tan beddalan karta. Rabitaanku waa laga adkaan karaa, waa la burburin karaa, waana la sameyn karaa hoosaad, laakiin looma sameyn karo inuu is beddelo illaa uu isagu doorto ama doonayo inuu beddelo mooyee. Waa xor inaad doorato haddii ay beddeli doonto iyo in kale. Awooda lagu doorto inay ku sii nagaanayso shaygan ama shay, ama inay sii dayso shayga oo aan la rabin, ayaa ah barta xorriyadda, halka ay ku taal xorriyadda ay rabitaan kastaa leedahay oo ay leedahay. Waxay u fidin kartaa bartaheeda aag xorriyadda iyadoo la doonayo in la noqdo, la sameeyo, ama la haysto, iyada oo aan la isku dhejinaynin waxa ay rabto in la noqdo, la sameeyo, ama yeelato. Markuu rabitaanku u fikiro isagoon ku xirnayn waxa uu u maleeyo, waa xor, xorna wuu leeyahay. Xoriyadda, waxay noqon kartaa ama sameyn kartaa ama lahaan kartaa waxa ay rabto ama yeelato ama yeelato, illaa iyo inta ay sii xirnaaneyso. Doodaha xorta ahi waa in aan la gaadhin, oo aan laga gaadhin.
Xigmad: waa isticmaalka saxda ah ee aqoonta.
Shaqada: waa maskax ama jir dhaqdhaqaaq, habka iyo qaabka ujeedadu tahay.
Adduunka, Noetic: ma ahan adduunyo maaddada dabiiciga ah; waa boqortooyada caqliga leh ama aqoonta dhabta ah ee Joogtada, waana mid ay ka kooban tahay dabeecadaha hal-abuurnimada ee dhammaan Saddex-jirka iyo sharciyada xukuma dabeecadda. Waa aqoonta weligeed aan isbedeleynin ee ku saabsan dhammaan Saddexda Saddexaad iyo waxa ku saabsan dhammaan wixii hore, xaadirka ah iyo waxa loo go'aamiyay sida mustaqbalka afarta adduunyo ee adduunka. Isku soo ururinta iyo beddelaadda aqoonta dareenka adduunka aadanaha iyadoo la soo maray iyo tijaabinta kuma dari karto adduunka aqoonta. Kuwani waa sida wax soo saarka xagaaga iyo jiilaalka, oo yimaada oo taga. Dunida aqoonta
waa isku darka aqoonta dhammaan Saddexda Saddex, iyo aqoonta wax walbana loo heli karaa Saddex Keli Saddexaad.
Khaldan: waa fekerka ama ficilka taas oo ah ka tagista waxa qofku ka warqabo sida saxda ah.